That's so good, right?: July 2014
ကျွန်တော့်နာမည်က မင်းမင်းဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့်ချစ်သူကတော့ ရဲလင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ဘ၀အတွက် တစ်ယောက် ဘ၀ကို မြုပ်နှံထားကြတာ သုံးနှစ်သုံးမိုးဆိုတဲ့ ကာလတစ်ခုတော့ဖြစ်သန်းလာခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့စတင်တွေ့ဆုံကြစဉ်မှာ ကျွန်တော်က တော့ရှင်းပါတယ် Top စစ်စစ်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ရဲလင်းကတော့ ဘယ်လိုအနေအထားကသူ့အတွက်အနှစ်သက်ဆုံးဆိုတာ ဝေခွဲမရ သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ သူက သူဟာ Versatile တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ခပ်ရှင်းရှင်းပြောတော့ အချိန်ပြည့် bottom တစ်ယောက် မဟုတ်လည်း အဆင်ပြေကြောင်း ကျွန်တော်အကြောင်းပြန်ဖြစ်ခဲ့တယ် ထင်ပါရဲ့။
ကျွန်တေ်ာ့အရပ်က ၅ပေ၈လက်မ ကိုယ်အလေးချိန်ကတော့ ၁၅၀ပေါင်လောက်ရှိမယ်။ ကျွန်တော့်ဆံနွယ်တွေက မဟူရာရောင်တောက် ပြီး ကြွက်သားအမြှောင်းမြှောင်းမဟုတ်ပေမဲ့ တောင့်တင်းကြည့်ကောင်းတဲ့ကိုယ်ဟန်ကိုပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းလိုလို တစ်နေရာရာကို လေးမိုင် သို့မဟုတ် ၁၀မိုင်လောက်တော့ ပျှမ်းမျှပြေးတယ်လေ။ ဟဲဟဲ…၇လက်မနီးပါးရှည်တဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲက ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထား ပြီးသားဗျ။ အသက် ၂၈နှစ်အရွယ်ရှိ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အမွှေးအနည်းငယ်ရှိတတ်ပြီး ရှိရင်းစွဲအသက်ထက်များစွာငယ်တဲ့ရုပ်ရည်ကိုပိုင်ဆိုင် ပါတယ်။
ရဲလင်းက အသက် ၂၆နှစ်၊ ၅ပေ လေးလက်မလောက်၊ ကိုယ်အလေးချိန်က ၁၂၂ပေါင်ရှိတယ်။ သူက Gym မှာ အသင်းဝင်ထားပြီး သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေ ပုံယွင်းသွားမှာ မတောင့်တင်းတော့မှာ အမြဲစိုးရိမ်နေတတ်သူပါပဲ။ သူက သူ့ကိုယ်သူ အရမ်းပိန်တယ်လို့ ထင်နေတတ်တာဗျ သူ့ရဲ့သွယ်လျလျကိုယ်ခန္ဓာဟာ ဘယ်လောက်ကြည့်ကောင်းတယ်ဆိုတာ သူမသိဘူး။ သူ့တင်ပါးတွေ ပြားချပ်ချပ် ဖြစ်နေမှာ စိုးရိမ်နေတတ်ပေမယ့် ပြောသလောက်ကြီးလည်း မပါးပါဘူး။ ကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်။ သူ့ဆံပင်ကို အညိုနုရောင်လေး ဆိုးထားပြီး နှုတ်ခမ်းမွှေးစစနဲ့ အပြုံးချိုချိုကိုပိုင်ဆိုင်သဗျ။
ဘယ်သူပဲသူ့ကိုကြည့်ကြည့်ပါ ယောက်ျားပီသလွန်းပြီး တော်တော်ချောတဲ့ ကောင်လေးပဲလို့ပြောကြမှာပါပဲ။ သူနဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသင်းတဲ့သူတွေ အကုန်လုံးလိုလိုက သူ့ဆိုရင် ခင်မင်နှစ်လိုဖွယ်ဆက်ဆံတတ်ကြ တာများ…အဲ…ကျွန်တော်က မနာလိုစိတ်ရှိတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ငပဲကတော့ စံချိန်မှီဗျ ကျွန်တော့်နီးပါး ရှည်ပြီး ပိုတုတ်သလိုပဲ။ သူက Top တစ်ယောက်အဖြစ်နေထိုင်ရတာကိုလည်း သဘောတကျဂုဏ်ယူတတ်သူပါ။ ဟုတ်တယ်သူက Top စစ်စစ်တွေထက်ကို ယောက်ျားပိုဆန်တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်သဘောသဘာဝအရ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်လည်း အဆီမတက်မဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့ အဲ….အရပ်ကတော့ မပုသင့်ဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့သူက ကျွန်တော့်ထက် အရပ်မမြင့်ချင်ဘူးတဲ့ခင်ဗျ။
Bottom တစ်ယောက်အဖြစ် သူနေပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ဖက်သားရဲ့ ပုံပန်းသွင်ပြင်နဲ့ ကိုယ်ရေကိုယ်သွေးကို တစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှ အဆင်ပြေမပြေဆုံးဖြတ်ပါသတဲ့။ လူတိုင်းနဲ့တော့ အဲ့အနေအထားကိုနေပေးဖို့အဆင်မပြေပါဘူး မကြိုက်ဘူးဆိုပါတော့လေ။ သူက Top နေရမယ်ဆိုရင်တော့ ယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ဖက်သားက တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းနေရင် ဘယ်ပုံလာလာအိုကေပါတယ်တဲ့ ဗျ။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား Relationship တစ်ခုအနေနဲ့တည်ဆောက်နေထိုင်ဖြစ်တဲ့ ပထမတစ်နှစ်မှာတော့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စမှာ တစ်ယောက်စိတ်ကြိုက်နဲ့ တစ်ယောက်အဆင်ပြေဖို့ စတင်ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ခင် မြတ်နိုးတဲ့ကိစ္စကတော့ လျှင်လျှင်မြန်မြန်ပဲကြီးထွားလာပါရဲ့။
အင်း….သေချာစဉ်းစားခဲ့ကြပြီးနောက်မှာတော့ နှစ်ယောက်သားရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်နွယ်မှုပုံစံဟာ open relationship တစ်ရပ်အသွင်ဆောင်တာကပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်မဟုတ်သော တစ်ခြားတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ပက်သက်တဲ့အချိန်မှာ Top တစ်ယောက်အဖြစ်နေချင်သေး တယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်အတ္တကြီးလို့မရဘူးမဟုတ်လား။ တစ်ခါတလေ B တစ်ယောက်က ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုကြွေပြီး ကီးပေးသွားတာကရှိသေး။
ပုံမှန်အားဖြင့်ပြောရရင် ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ သူတစ်ယောက်တည်းနဲ့တင် လိင်ဆက်ဆံမှုကိစ္စမှာ စိတ်ကျေနပ်ပြည့်ဝနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတလေ သူစိမ်းတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ကီးပေးခြင်းကို ခံစားရတဲ့ဖီလင်ကိုတော့ တမ်းတမိသား။ ကျွန်တော်တို့ တစ်လင်တစ်မယား ပြောရမလား ဘယ်သူနဲ့မှမပတ်သက်တဲ့ ဆက်ဆံရေးပုံစံကို အဆုံးသတ်လိုက်ကြပြီးနောက် အင်တာနက်ကိုသုံးလို့ဖြစ်စေ ဟိုလိုဒီလိုနဲ့ ဖြစ်စေ တခြားငနဲတွေကို ရှာပြီး အလုပ်အားရက်များမှာ ဒိတ်လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို အခြားစုံတွဲတစ်တွဲနဲ့ ကံအားလျော် စွာတွေ့မိကြတယ်ဆိုရင်တော့ အကြိုက်ပေါ့ အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာပဲ တူစုံတွဲပျော်ပါးဖြစ်ကြတာပေါ့နော်။
တစ်ရက်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကြီးက ဝေဖြိုးဆိုတဲ့တစ်ယောက်သောသူနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရဲ့။ အသက်က ၃၅နှစ်၊ဆံပင်တွေက အနက်ရောင်တောက်တောက် bisexual တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လက်ထပ်ထားကာ သားလေးနှစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင် ထားသူဖြစ်ပါတယ်။
ဝေဖြိုးဆိုတဲ့ လူကို ပထမဆုံးအကြိမ် အိမ်ကိုခေါ်သွားပြီး ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကစားကြချိန်မှာပဲ ရဲလင်းရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေ အကြိုက် တွေအကုန်သူယူသွားသလိုခံစားရပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး အတွဲညီနေတာ တစ်ညလုံးလိုလိုပါပဲ။ တစ်ခါတလေ အိမ်နဲ့မလှမ်း မကမ်းမှာနေတဲ့ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်စတက်နေသော ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးကိုတော့ ကျွန်တော်ကချိတ်မိပြီး လေးယောက်သား အိပ်ရာတစ်ခုထဲ တစ်နာရီထက်ပိုသောအချိန်ဖြုန်းမှုများနဲ့ကစားဖြစ်ကြပါတယ်။ ရဲလင်းမရှိချိန်များမှာတော့ လွင်မင်းဆိုတဲ့ဆယ်ကျော် သက်လေးကို တည်းခိုခန်းတစ်ခုခုကို မမသွားပြီး နှစ်သိမ့်ပေးရတာပေါ့ ထကြွနေသောသူ့စိတ်များကိုလေ။ ကိုဝေဖြိုးနဲ့ ရဲလင်းတို့ရဲ့ တက်ကြွသော သန်မာသော အချိန်ကြာကြာ သက်လုံကောင်းမှုတွေကို ကျွန်တော်လေ့လာသင်ယူရဦးမယ်နဲ့တူတယ်။ တစ်ညလုံးလိုလိုမှ ရဲလင်းတစ်ယောက်က တစ်နာရီလောက်သာ အိပ်ချင်အိပ်တတ်တာဆိုတော့။
သိပ်မကြာသောအချိန်ကာလမှာပဲ ကိုဝေဖြိုးတစ်ယောက် ကျွန်တော်တို့အိမ်ကို ပုံမှန်သဘောလောက်ကိုလာပါရော။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ လက်ထပ်ပြီးသားလူတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်တို့သဘောကျစပြုလာပြီဆိုတာ အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သဘော ပေါက်စပြုလာပါတယ်။ သူ့မိန်းမအနေနဲ့ သူဟာ bisexual တစ်ယောက်ဆိုတာ ရိပ်မိသွားပေမဲ့ ရောဂါရစေမယ့်အပြင်ထွက်ပျော်ပါးတဲ့ ကိစ္စကိုတော့စိုးရိမ်သတဲ့။ သူကလည်း မဟုတ်တာတွေမလုပ်ပါဘူး ရောဂါမဖြစ်အောင်ဆင်ခြင်ပါ့မယ် safe sex ဖြစ်စေရပါမယ်လို့ ကတိပေးထားရော။ တစ်ခါတရံတော့ သူ ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ တစ်ညလုံးအချိန်ဖြုန်းသွားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကြား ပေါင်းသင်းဆက်နွယ်မှုဟာ တဖြေးဖြေးကြီးထွားလာပါတယ်။ အချိန်ကာလလေးကြာလာတာနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ကိုဝေဖြိုးအပေါ် စွဲလမ်းစိတ်တွေပိုလာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ် ရဲလင်းကိုချစ်တာမျိုးကျတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး နည်းနည်းကွဲသလား လို့။ သူသာ သာယာမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကို လိုသလိုအသုံးချဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်လေ။ ရဲလင်းတစ်ယောက် တော်တော် သောက်ပြီး ရေချိန်လွန်သောညတစ်ညမှာတော့ အိပ်ရာပေါ်ဝယ် ကိုဝေဖြိုးက အပေါ် ကျွန်တော်ကအောက်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခု ရောက်သွားတယ်။
ပထမဆုံးအကြိမ်ဆိုတော့ သေလုအောင်နာတာပါပဲ….စိတ်ကိုဘယ်လိုလျော့ထားရမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မသိ ဘူး…အလိုက်သင့်ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာလည်း မသိဘူး….ပြီးတော့ သူ့ငပဲကလည်း စံမှီဂိုက်မှီဆိုတော့လေ။ ဒါပေမဲ့ ကိုဝေဖြိုးက တော်တော် ညင်သာသလို ကျွန်တော်အဆင်ပြေမယ့် အနေအထားကိုသူက စဉ်းစားပြီး အလိုက်သင့်နေစေတယ်။ သူသာ ဒီလိုအမြဲဆိုရင် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာ ကျွန်တော်နေပေးနိုင်မယ်ထင်ပါရဲ့။ နောက်တစ်ကြိမ်သူနဲ့ထပ်ဖြစ်တော့ ရဲလင်းအိပ်ရာကိုအစောကြီးမ၀င် သေးဘူး နည်းနည်းခပ်ထွေထွေနဲ့ ဆိုဖာရှည်ကြီးပေါ်လှဲနေချိန်မှာထင်ပါတယ်။
ပူလည်းမပူ အေးလည်းမအေးသော ပူနွေးသောညတစ်ညမှာပေါ့ ခပ်ပါးပါးစောင်တစ်ထည်ကို ကျွန်တော်နဲ့ ကိုဝေအတူခြုံပြီး ငြိမ်သက် နေကြတာ နှစ်ယောက်သားရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေ အပြန်အလှန်ကြားနေရတယ်လို့ထင်ရပါသောအချိန်။ ရဲလင်းက ဆိုဖာရှည်ပေါ်မှာ အသာငြိမ်နေချိန် ကျွန်တော်တို့က စားပွဲခုံရဲ့တစ်ဖက်ခြမ်းဝယ် တစ်ယောက် ငပဲကို တစ်ယောက် -ီးနေကြပါတယ်။ ခဏနေတော့ ကိုဝေက ကျွန်တော့်ကို -ိုးတဲ့အချိန်မှာတော့ ဘယ်လိုထိန်ချိန်ထားမှုမပြုဘဲပြောရရင် တော်တော်သာယာတယ်လို့ပြောရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ မလှမ်းမကမ်းဝယ် ရဲလင်းကလှဲလျောင်းနေတော့ သူနိုးထလာမှာကိုလည်းစိုးရိမ် စိတ်ကလည်းအရမ်းလှုပ်ရှားကာ ခံစားမှုတွေ အရှိန်ပြင်းရလေသတည်းပေါ့နော်။
ကျွန်တော်နဲ့ ဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုဝေဖြိုးတစ်ယောက် အိမ်ကို မကြာခဏဆိုသလို အလာစိတ်ပါတော့တယ်။ ရဲလင်းက လည်း ဖိတ်ခေါ်တာကိုးနော်။ တစ်ခါတလေ ကျွန်တော်အလုပ်များချင်ယောင်ဆောင် ကိစ္စများသယောင်ဆောင်ပြီး အိမ်ပြန်နောက်ကျ အောင်ဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်။ ရဲလင်းအပြင် ကျွန်တော့်အပေါ် ဘယ်လိုကောင်လေးတစ်ယောက်ယောက်ကများ တိမ်းညွှတ်မလဲဆိုတာ ကွင်းဆင်းတာလဲပါမယ်။ နောက်တစ်ယောက်တွေ့တော့လည်းဘာဖြစ်လည်း foursome လုပ်လို့ရတာပဲလေ မဟုတ်ဘူးလား။ ကောင်ချောလေးတွေထိုင်တတ်တဲ့ ဘားတွေကလပ်တွေသွားတယ် ဘာရယ်မဟုတ် Gym ကိုလည်းသွားတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြော ရရင် ကိုဝေဖြိုးနဲ့ ရဲလင်းရဲ့ဆက်နွယ်မှုပုံစံကို ကျွန်တော် တကယ်မနာလိုဘူး။ ကျွန်တော်သိတယ် ကိုဝေဖြိုးနဲ့အတူ ကျွန်တော့်တိုက်ခန်း မှာ အတူအချိန်ဖြုန်းရတဲ့အဖြစ်ကို ရဲလင်း အဆုံးရှုံးခံမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ ကိုယ့်ချစ်သူလို့သတ်မှတ်ထားသူ တစ်ယောက်အပြင် တခြားတစ်ယောက်နဲ့ပါ ပတ်သက်ရတာ စိတ်ထဲသက်သောင့်သက်သာမရှိလှပါ။ သူကတော့ ကျွန်တော့်အပြင် တခြားသူနဲ့ ပတ်သက်ရလည်း သက်သောင့်သက်သာဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာ သိတယ်ကျေနပ်တယ်။
ရဲလင်းနဲ့ ကျွန်တော် ချစ်သူသက်တမ်းက နှစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီလေ။ ရဲလင်းအနေနဲ့ ကျွန်တော့်အပေါ်ထားတဲ့ သံယောဇဉ်၊ဂရုစိုက်မှု၊ ချစ်ခင်မှုပုံစံမျိုးကို တခြားတစ်ယောက် အထူးသဖြင့် ကိုဝေဖြိုးလိုအပ်နေတာတွေကိုပေးအပ်နေတဲ့အပေါ် ကျွန်တော်မပျော်ပါဘူး။ ကျွန်တော် ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့တဲ့ ပါတနာတွေအတော်များများက တစ်ညအိပ် သို့မဟုတ် အကြိမ်အနည်းငယ်လောက်သာပြန်တွေ့တတ်သူ မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့တွေအကုန်လုံးအပေါ် ကျွန်တော့်စိတ်က ရှင်းပါတယ် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တွေ့ဆုံချင်စိတ် ပုံမှန် လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်မရှိပါဘူးဆိုပါတော့။ လူတစ်ယောက်ကိုပဲ ကျွန်တော့်စိတ်ခံစားချက်ကိုပုံခဲ့တယ် သူ့ကိုချစ်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ ဟူး…..ရဲလင်းနဲ့ ကိုဝေဖြိုးရဲ့ပုံစံကတော့ အချိန်တော်တော်ကြာနေပြီထင်ရတဲ့အထိ ဟုတ်တယ် ကာလာကြာရှည်ဆက်ဆံရေးပုံစံမျိုးထင် ရပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော့်ခံစားချက်ကို ရဲလင်းနဲ့ပြောဖြစ်တော့ သူ ကျွန်တော့်ခံစားချက်အပေါ် တော်တော်အံ့သြသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက ကျွန်တော့် Facebook’s Profile မှာ Relationship ကိုပြောင်းပြီးရေး ပုံမှန်တွေ့ဆုံဖြစ်မယ့် ပါတနာမျိုးလိုချင်ကြောင်းရေးလို့ အကြံဥာဏ်ပေးပေမယ့် သူနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားရဲက ပေါင်းသင်းဆက်နွယ်မှုကို အဆုံးမသတ်ချင်ခဲ့ပါဘူး။ အင်း….အဲ့လိုနဲ့ ရက်သတ္တပါတ်သုံးပါတ်လောက်အကြာမှာတော့ ကျွန်တော် လွင်ကိုနဲ့တွေ့ဆုံပါရော။
ပထမဆုံးအကြိမ်မှာပဲ သူ့ကို နောက်တစ်ကြိမ် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လာဖို့ မျှော်လင့်မိသလိုပဲ။ ဒါပေမဲ့ အမှန်တကယ်တမ်းတော့ မမျှော် လင့်ချင်ဘူးဗျ။ လွင်ကိုနဲ့တွေ့တော့ bottom နေပေးဖြစ်ပြန်တာဆိုတော့ အရင်ကလည်း ကိုဝေဖြိုးနဲ့ နေပေးဖြစ်တာကိုနှစ်ကြိမ်တောင် ရဲလင်းက မြင်ဖူးခဲ့တာဆိုတော့ ကျွန်တော်နဲ့ နေတာထိုင်တာ သိပ်အစေးမကပ်တော့သလိုထင်ရတယ်။ ရဲလင်းက ကျွန်တော် တခြားတစ်ယောက်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံနေတာကို ကြည့်ရတာ တော်တော်ကြိုက်ပုံရသဗျ။ ကြည့်ပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက် ကိုဝေဖြိုးပြုသမျှ သူ အဆင်ပြေပြေနေပေးတော့တာပါပဲ။ ကိုဝေဖြိုးက တစ်ညမှာ တစ်လျော့ကိုအကြာကြီးဆွဲတတ်တယ်။ နောက်တစ်ခါ နောက်တစ်ကြိမ် ဆိုရင် ပြဿနာနည်းနည်းရှိတယ်ဗျ။ ဒီတော့ သူ ရဲလင်းနဲ့ play ချိန်ဆို ကျွန်တော်နဲ့ လွင်ကိုတို့ မလှမ်းမကမ်းမှာ လှဲလျောင်းရင်း ကြည့်ကြတာပေါ့နော်။
လွင်ကိုက အရပ် ၆ပေ၂လက်မ၊ အသားအရေက တကယ့်ကိုညိုမောင်းနေတာ၊ သူ့ငပဲကလည်း တကယ့်ကိုရှည်တယ် ထိပ်အရေပြားလဲ ဖြတ်မထားဘူးလေ။ ကျွန်တော်သိတယ် သူ့အသွင်အပြင်ကို ကျွန်တော်သဘောကျပြီး နှစ်သက်နေပြီဆိုတာကိုပေါ့။ ဒါဇင်ချီတဲ့ ငနဲတွေ ကို ကျွန်တော့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးခဲ့ဖူးတယ် အချို့သောသူတွေသာ အပျင်းပြေပြန်ဆက်တတ်ကြပေမယ့် လွင်ကိုကတော့ မကြာခဏ နှုတ် ဆက်တာ ဟိုမေးဒီမေးလုပ်တဲ့အပြင် နောက်တစ်ကြိမ်လောက် လာလည်လို့ရမလားတဲ့။ တတိယအကြိမ် သူလာလည်အပြီးမှာတော့ သူသည်လည်းပဲ လက်ထပ်ပြီးသူတစ်ယောက်ဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။သူ့ဇနီးကတော့ လွင်ကို တခြားအမျိုးသားတွေနဲ့အတွင်းကျကျ ဘယ်လိုပတ်သက်လဲဆိုတာ စိတ်မ၀င်စားဘူး သိဟန်လည်းမတူပါဘူး။ လွင်ကို ကျွန်တော်နဲ့ရှိတဲ့အချို့သောအချိန်တွေမှာ သူမက မကြာခဏဆိုသလို ဖုန်းခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီတော့လည်း လွင်ကိုဟာ ကိုဝေဖြိုးလို ကျွန်တော်နဲ့ ရဲလင်းတို့နဲ့အချိန်အများကြီးမဖြုန်းနိုင် ဘူးပေါ့နော်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်ဆံရေးက မဆိုးပါဘူး ဘော်ဒါကဏ္ဍအတွက် အိုကေပြီး နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသူပါပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် versatile ဖြစ်စေဖို့ ပိုသေချာစေသူလေ။
အတော်တော့ထူးဆန်းပါတယ် ရဲလင်းကို ကိုဝေဖြိုးက နှစ်လျော့လောက် -ိုးပြီးချိန်ဆို ကျွန်တော် ရဲလင်းကို ကလိုင်းရတာပိုကြိုက်နေတဲ့ ခံစားချက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ အစပိုင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ ကွန်ဒုံးသုံးပြီးဆက်ဆံကြဖို့ သဘောတူထားကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဆက်ဆံကြတာတွေ ကြာလာပြီး သက်သောင့်သက်သာဖြစ်သလိုခံစားကြရချိန်မှာတော့ ကွန်ဒုံးသုံးပြီးဆက်ဆံကြတာကိုရပ်လိုက်ကြပါ တယ်။ အန္တရာယ်ရှိမှန်းသိပေမယ့် ကိုဝေဖြိုးရဲ့အရည်အချို့နဲ့ရွှဲနေတဲ့ ရဲလင်းခရေ၀ကို လုပ်ရတဲ့ ခံစားချက်ကို ကျွန်တော်ဘယ်လို ကြိုက်မိသွားမှန်းမသိပါဘူး။
တစ်ခါတော့ ရဲလင်းတစ်ယောက် ကျွန်တော် လွင်ကိုနဲ့bottom နေဖူးလိုက်တာကို သတိရသွားဟန်တူတယ် သူလည်း ကျွန်တော့်ကို သူ့အတွက် Bottom အနေအထားနေပေးဖို့ စိတ်ဝင်စားဟန်ပြလာရော။ ဟိုအရင်က တစ်ခါဖူးမျှ သူမကြိုးစားပေမဲ့ လွင်ကို ကျွန်တော့်ကို ချပြီးပြီးချင်း ကျွန်တော့်ကို ပို့ဖို့လုပ်ပါတော့တယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ ပေါင်းသင်းဆက်နွယ်မှုကြား ပြောင်းလဲလာတဲ့အမြင်ခံစားချက် ဖြစ်ပြီးတော့ နှစ်ဦးသားအတွက် ပိုပြီးပျော်ရွှင်စေမယ့်ကိစ္စဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေ။
ကျွန်တော်တို့အိမ်ကို ကိုဝေဖြိုးလာလာလည်နေတာ (၈)လလောက်ကြာပြီးနောက်မှာတော့ သူက သူ့ဇနီးနဲ့ဆက်ဆံရေးပြောင်းလဲမှုကို ကြေငြာပါတော့တယ်။ သူ့ဇနီးသည်လည်း အခြားသော ချစ်သူတစ်ယောက်ရသွားပြီဆိုတော့ ရဲလင်းဆီကိုမကြာခဏဆိုသလိုလာလည် နိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့။ ကိုဝေဖြိုးနဲ့ ရဲလင်းတို့နှစ်ယောက်ကြည့်ရတာတော့ အဆိုပါကိစ္စအပေါ် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြ ပုံပေါ်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ အဲဒါကို သိပ်တော့သဘောမကျပါဘူး။ ကျွန်တော့်အတွက် လွင်ကိုက အလားတူအချိန်ပေးမှုရရှိ နေပေမယ့် ခံစားချက်ကသိပ်ကိုကွာပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် လွင်ကိုနဲ့ လိင်ဆက်ဆံရတာ ကျွန်တော့်အတွက် ဒင်ပြည့်ကျပ်ပြည့်စိတ်ကျေ နပ်မှုရစေတာ မှန်ပေမယ့် တစ်လကို နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်လောက်သာ သူနဲကတွေ့ဆုံချင်ရုံသက်သက်ပဲဖြစ်မယ်။
ကိုဝေဖြိုးလာလည်မှုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာ တက်ကြွနေတာလေးတွေနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ ရဲလင်းရဲ့အမူအယာတွေကိုကြည့်ရ မြင်ရတာအတွက် ကျွန်တော်ပျော်ပါတယ်။ ခုံစောင်းတစ်ခုမှာ တင်သားဆိုင်ကိုတင် ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ကိုဝေဖြိုးပခုံးပေါ်ထမ်းစေရင်း ကိုဝေဖြိုးရဲ့ ဒင်ကြီး ရဲလင်းခရေ၀ထဲဝင်ထွက်နေတာကိုမြင်ရတာကိုလဲ ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ ခပ်တိုးတိုးလေး သို့မဟုတ် ခပ်ကျယ် ကျယ် ညည်းညူတဲ့ အသံလေးတွေ….အရှိန်မြင့်လာတဲ့ခံစားချက်နဲ့အတူ တုန်ယင်လှိုက်မောတဲ့ အသံတွေ….ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်း လှုပ်ရှားရုန်းကန်ပုံတွေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုဝေဖြိုးနဲ့ ရဲလင်းဆက်ဆံနေချိန်ကြားရတဲ့အသံတွေကို ကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်။ အိမ်နီးနားချင်း တွေတောင်ကြားမလားမသိဘူး ရဲလင်းအသံက ဘယ်တော့မှ မတိုးဘူး သူ့စိတ်လှုပ်ရှားတာနဲ့အမျှ ကြားရသူ စိတ်လှုပ်ရှားအောင်ကို အသံမျိုးစုံထွက်တတ်တာပါ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ သူဟာ ရင်ခုန်သံရပ်တန့်သွားစေနိုင်သူဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။
ကိုဝေဖြိုး တနင်္ဂနွေညတစ်ညမှာ ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုအလည်တစ်ခေါက်ရောက်လာပြန်တယ်။ သူနဲ့တစ်ပြိုင်တည်းလိုလို တစ်ခါတလေ လွင်ကိုရောက်လာတတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ထက် ကျွန်တော်ပိုပြီးကျေနပ်မိသလိုပါပဲ။ လွင်ကိုက တစ်နာရီလောက်သာအချိန်ဖြုန်းပြီး ကျွန်တော့်ကို မွတ်သိပ်စွာအနမ်းတစ်ချက်ပေးကာ ပြန်ပြန်သွားတတ်ပါရဲ့။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကို နှစ်လိုတက်မက်စွာ နမ်းတယ် ပွေ့ဖက်တယ် ခရေ၀လေးကို ကလိတယ် ပြီးတော့ သူ့စိတ်တိုင်းကျ မုန်တိုင်းထန်ပြီးနောက် သူ့သုက်ရည်တွေကို ကျွန်တော့်ဗိုက်သား ပေါ်ဖြန်းဖြန်းပစ်ခဲ့တဲ့အပြုအမူကို ကျွန်တော် သဘောကျပါတယ် ကျေနပ်တယ်။ နောက်ပြီး စိတ်ထဲကြိုက်နှစ်သက်မိတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခု ကတော့ ဖွေးဖွေးဖြူနေတဲ့ ရဲလင်းရဲ့တင်သားဆိုင်တွေကြားထဲ ညိုမောင်းရှည်လျားတဲ့ ကိုဝေဖြိုးရဲ့ငပဲကြီး အရှိန်ပြင်းပြင်းဝင်ထွက်နေ တာကို အနီးကပ်မြင်ရတာဟာ တကယ်လှပတဲ့ ကင်မရာရိုက်ချက်တွေလိုပါပဲနော်။ အိုး…ရှီး….ပြောနေရင်းနဲ့ လွင်ကို့ကို တွေ့ချင် စိတ်တွေ ပြင်းပြလာပြီဗျာ။
ပုံမှန်လိုလို အလုပ်အားလပ်တတ်တဲ့ တနင်္ဂနွေတစ်ရက်မှာ ရဲလင်းတစ်ယောက် အပျင်းပြေကစားဖော်ကစားဖက် အဖြစ် လူငယ်လေး သုံးလေးယောက်စီသွားလည်မလို့ဆိုပဲ သူအွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရင်းနီးခင်မင်သူများပေါ့နော်။ သူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာတွေက ကျွန်တော်တို့ အခန်းနဲ့ ၁၀မိုင်လောက်ဝေးပါတယ် လာမယ်ဆိုရင်လေ။ အခုမှ သတိပြုမိတယ် ရဲလင်းတစ်ယောက် အချို့သော မွန်းလွဲပြီးနောက်ပိုင်း တွေမှာ သူတို့ဆီသွားဖို့ အမြဲလိုစိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်ဆိုတာ။ ထူးထူးဆန်းဆန်း လွင်ကိုတစ်ယောက် အလျင်စလိုရောက်လာတယ် ကျွန်တော်နဲ့ချစ်ပွဲဝင်တယ် ကျွန်တော့်ခရေထဲကို သူ့သုက်ရည်တွေအပြည့်များဖြည့်သလားပဲအများကြီး ထည့်သေးတယ်….ပြီးတော့ ကျွန်တော် Climax ဖြစ်ပြီးပန်းထုတ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်ပေါ်က သုက်ရည်တွေကို သူ့လျာနဲ့လျက် ပြုသလို ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်း တွေကိုလည်း မွတ်သိပ်စွာ အနမ်းကျောရှည်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်ကျရောက်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လိင်ဆက်ဆံကြပြီးနောက် ၀ရံတာ မှာ ခဏထိုင်ပြီး စကားပြောဖြစ်တော့ သူကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံပါတ်သက်ရမှုအပေါ်သာယာလာပြီး လိင်ကိစ္စထက်ပိုတဲ့ ပါတ်သက်ဆက် နွယ်မှုဖြစ်ချင်လာတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဗျ။
အဲ့ခံစားချက်က နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက် ဘယ်လိုမှ ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်လို့ သူ့ကို ကျွန်တော်သတိပေးတော့ သူကနားလည်ပါ တယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်နော်နဲ့စတင်ပါတ်သက်မိတဲ့ ပထမဆုံးနေ့ကတည်းက သူသဘောကျခဲ့တာပါတဲ့။ ဟူး….စကားလည်းပြော ကျွန်တော့် မျက်နှာကိုလည်း စိုက်ကြည့်နေရင်းမှ သူ ကျွန်တော့်ကိုထွေးဖက်လိုက်သလို ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းစုပ်ပြန်ကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်လှဲ အိပ်စေလျက် ကျွန်တော့်ခရေ၀ကို သူလျာပြန်ကျွေးတာကြောင့် စိတ်တွေပြန်လည်လှုပ်ရှားကာ hard-on ဖြစ်လာကြပြီး ဒုတိယအကြိမ် ချစ်ပွဲဝင်ကြပြန်ပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ် သူ့ကိစ္စအဆုံးသတ်ဖို့အတွက် အချိန်တော်တော်ကြာတယ်ဗျ…..လုပ်ရင်း လုပ်နေရင်းနဲ့ ရုတ်တရက်ဆိုသလို သူ့အိမ်ကို သူ့မိန်းမစောစောပြန်လာမယ့်ကိစ္စစိတ်ရောက်သွားရင်း ဆက်မလုပ်တော့ဘဲ အ၀တ်ကောက်ဝတ်ကာ ပြန်သွားပါရော။ သူအိပ်ခန်းတံခါးကိုပိတ် လှေကားကနေ ဆင်းသွားတဲ့ခြေသံကိုကြားနေရပြီးနောက်မှာတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲဘာလဲ မသိ ကျေနပ်ကြည်နူးစိတ်ကရင်ထဲလှိမ့်ဝင်လာတယ်။
အချိန် နှစ်နာရီလောက်ကြာပြီးနောက် ကိုဝေဖြိုး ကျွန်တော့်စီ ဖုန်းဆက်တယ် သူအိမ်ကနေထွက်လာခဲ့ရမလားတဲ့။ သူ ကျွန်တော့်စီလာ မယ် ဆိုရင် ဖုန်းအရင်မခေါ်ဘဲ ဘယ်တော့မှာမလာတတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို တစ်ခါတလေ ရဲလင်းက တခြားအမျိုးသားအချို့နဲ့အတူ ကျွန်တော့်အခန်းမှာ ရှိနေတတ်တာကို သူသိနေတာကိုး။
`ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ….လာခဲ့ပါ….ရဲလင်းအိမ်မှာမရှိပါဘူး…သူဘယ်အချိန် အိမ်ပြန်ရောက်မလဲ မသိပါဘူးလေ´
`ကောင်းပါလေ့….သူ့လက်ကိုင်ဖုန်းကိုဆက်ပြီးတော့ ကျုပ် ခင်ဗျားတို့အခန်းလာမယ့်အကြောင်းပြောဦးမှနဲ့တူတယ်။ ကျုပ်လာမယ် ဆိုရင် သူ မဖြစ်မနေပြန်လာချင်ပြန်လာမှာလေ ဟဲဟဲ´တဲ့ ကိုဝေဖြိုးက ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ပြောသေး။
`သဘောပါဗျာ….သူ သုံးလေးနာရီလောက်ကတော့ ပြန်ရောက်ဦးမှာမဟုတ်ဘူး။ အိမ်ကို သူစောစောပြန်လာမယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော် မအံ့သြပါဘူးဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ သူအိမ်ကိုစောစောပြန်လာအောင် ဖိအားပေးသလိုဖြစ်မှာဆိုးလို့ ဘယ်တော့မှ ဖုန်းမဆက် တာအမှန်ပဲ´
`အင်း…သူ့ကိုဖိအားမပေးတော့ပါဘူးလေ…ဒါပေမဲ့ သူနဲ့ ကျုပ် ကမြင်းကြမယ်လို့သူသိများသိမယ်ဆိုရင် သူသေသေချာချာကိုပြန် လာမှာဗျ ဟဲဟဲ´ ကိုဝေဖြိုးက သဘောတကျနဲ့ရယ်ပြီးပြောနေသေးတယ် အပိုင်ပေါ့လေ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ရဲလင်းအပေါ်ပြောတဲ့ စကားမျိုးကြားပြန်တော့ ရင်ထဲခံရခက်ပြန်ပါတယ်။
ဖုန်းမခေါ်ဘူးလို့သာပြောတာ ကျွန်တော် ရဲလင်းစီကိုဖုန်းခေါ်လိုက်ပြီး ကိုဝေဖြိုးတစ်ယောက် အိမ်ကိုလာမလို့ မင်းနဲ့တွေ့မလို့ပြော တယ် ဖုန်းဆက်လိမ့်မယ်ပြောလိုက်တော့ ရဲလင်းက အလျှင်အမြန်ပါပဲ အကြောင်းပြန်တာက သူ အဲ့ဒီမှာ နှစ်နာရီ သုံးနာရီလောက် အချိန်ဖြုန်းဦးမှာတဲ့။ သူ့သူငယ်ချင်းအသစ်တွေက အခြား ငနဲသုံးလေးပွဲလောက်ကိုပါခေါ်ပြီး ပါတီသဘောမျိုးလုပ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကျွန်တော့်စီ ဖုန်းနှစ်ခါလောက်ပြန်ခေါ်ပြီး ညနေစာစားနှင့် သူ့ကိုမစောင့်နဲ့ဆိုတာကိုပါပြောသေးတယ်။ `အခုအခန်းမှာ လူတွေတော်တော်များတာဗျ ဒီလိုလူများများနဲ့ကစားပွဲမလုပ်ရတာတောင်ကြာပြီ အစ်ကိုလာမလား လာမယ်ဆိုရင် လိပ်စာပြောပြ မယ်လေ။ Richard နဲ့ ဇေယျာက အစ်ကိုလာမယ်ဆိုလည်း ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့တဲ့ပြောနေကြတယ်ဗျ´သူအတည်ပြောနေတာပဲ။
`အင်း…ကြားရတာတော့ကောင်းသားပဲ baby… ဒါပေမဲ့ အစ်ကို နည်းနည်းပင်ပန်းနေတယ်။ လွင်ကိုနဲ့ နှစ်ချီလောက်ဆွဲထားတာကွ။ ညီလည်းသိပါတယ် နှစ်ချီလောက် အစ်ကိုဆွဲထားရင် စိတ်သိပ်မပါတတ်တော့ဘူးဆိုတာလေ´ ကျွန်တော် မကွယ်မ၀ှက်ပြောပြဖြစ်ပါ တယ်။
ဖုန်းခွက်ပြန်ချလိုက်စဉ်ခဏလေးမှာပဲ ကိုဝေဖြိုးစီက ဖုန်းဝင်လာပါတယ်။ ` သူ ဒီည မပြန်လာတော့ဘူးတဲ့ဗျ။ ကျုပ်တော့ ဖီလင်ငုတ်ပါပြီ ဗျာ´ဆိုပဲ။
`ကဲကြည့်လေ…ခင်ဗျားသိပြီဟုတ်? ရဲလင်းက ငပွေးလေးတစ်ယောက်ဆိုတာလေ။ ကျွန်တော်လည်း အလားတူပွေးတာပါပဲ။ ခင်ဗျားခေါ် တိုင်း လာနိုင်မယ့်သူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာပြောနိုင်တယ်ဗျ။ ခင်ဗျား တစ်ယောက်တည်းနေရတာ ပျင်းတယ်ဆိုရင် တော့ ကျွန်တော့်အခန်းလာပြီး စားသောက် ရုပ်ရှင်ကြည့် သီချင်းဆို ကြိုက်တာလာလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ရဲလင်းတစ်ယောက်တည်း ခင်ဗျားကို ပျော်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျ။ သူက ကျွန်တော့် ခင်ပွန်းနော်….ပြီးတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့သူ့ကို အရမ်းပူပန်ပြီး တားမြစ် ပိတ်ပင်နေတတ်သူတော့မဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်ယောက်က အပိုင်သဘောမျိုးပြောလာရင်တော့ စိတ်တိုတယ်။ ကဲ…ခင်ဗျားစိတ် ပြေရာပြေကြောင်း တစ်ခုခုလုပ်လိုက်လေ နော်´ ကျွန်တော် နည်းနည်းလေးတော့လေသံမာသွားရပါတယ် ဘယ်လိုမှအေးဆေးမပြောနိုင် လိုက်ဘူးဗျာ။
`ဟုတ်ပါပြီ….ကျုပ်မိန်းမကလည်း သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဒီည ပိုကာဆွဲကြမလို့တဲ့။ ကျုပ်ကိုမခေါ်တာနဲ့မကစားရဘူးပေါ့ဗျာ။ အဲဒါ ခင်ဗျား စိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင် ခင်ဗျားစီလာပြီး အတူတူတစ်ခုခုသောက်ကြတာပေါ့ Raspberry Vodka တစ်ပုလင်းလောက်ဆွဲခဲ့ရ မလား´သူလေသံ နည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်။
`ပြဿနာမရှိ။ ကျွန်တော်ရှိတယ် အိမ်မှာ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတူတူသောက်ကြတာပေါ့ ရဲလင်းအိမ်ပြန်လာရင်လည်း သူ့ဝိုင်းဆွဲ ကြတာပေါ့။ သေချာတာကတော့ သူပြန်လာရင် ပင်ပန်းပြီး ဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျ´ သူရယ်သလို မခိုးမခန့်ရယ်ပြီးပြောလိုက် တယ်လေ။
ကိုဝေဖြိုး အချိန်သိပ်မကြာဘူး ရောက်လာတာဆိုတော့ သူ့အိမ်ကနေ ကျွန်တော့်အခန်းရှိရာကို ကားမောင်းလာတာပဲဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ယာစခန်းရဲ့အနောက်ဖက်ဂိတ်မှာ ကားထိုးခဲ့ပြီး သူ့လက်ထဲမှာတော့ သူ့စကားအတိုင်းအပြင် ဘီယာကော တခြား စားစရာတွေပါလာတယ်။ သူ့မြင်လိုက်တော့ ဘာရယ်မဟုတ် အခုလေးပဲရေချိုးထားတာရယ် ခရေအတွင်းပိုင်းတွေကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ဖြစ်ထားတာရယ် နေ့လည်က လွင်ကိုနဲ့ ချစ်ပွဲဝင်ထားတာတွေကို စိတ်ထဲရုတ်တရက် ရင်ခုန်လာရော။ ဘယ်သူမှမလာရင်တော့ တစ်ယောက်တည်း ရုပ်ရှင်ကြည့် သီချင်းနားထောင် စာဖတ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး အချိန်ဖြုန်းမလို့စီစဉ်ထားတာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ကိုဝေဖြိုးက သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်တော့ဟုတ်တယ်ဗျ….သူနဲ့ နှစ်နာရီလောက် စကားနာထောင်ပေးပြီးအချိန်ဖြုန်းရတာက ကျွန်တော့်ကို နာကျင်တဲ့ခံစားချက်တွေမပေးလောက်ပါဘူး။
သူသောက်ဖို့ သူ့အကြိုက်တွေကို ထည့်စရာ ဖန်ခွက် ပုဂံအစုံအလင်နဲ့ တီဗီရှေ့မှန်စားပွဲခုံပေါ်သူ့ဖာသာပြင်ဆင်နေတာက အေးဆေး။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ဘီယာပေါ့။ ပထမတစ်ခွက်လောက်သောက်အပြီးမှာတော့ သူ Run နဲ့ Coke ကိုရောပြီး ကျွန်တော့်ကိုကမ်းပေး တယ်။ `ကျုပ်ရေချိုးဇလုံထဲ ဆပ်ပြာရည်နွေးနွေးလေးနဲ့သွားစိမ်ဦးမှပါပဲ အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား ဘော်ဒါ´
`ရပါတယ်ဗျ….ကိုယ့်အိမ်လိုသာနေ အေးဆေး´ ကျွန်တော်သူ့ကိုလေပြေတိုက်လိုက်ပြီး ကိုင်ထားတဲ့ဖန်ခွက်ထဲက သူရာရည်ကိုအနည်း ငယ် ငုံစုပ်လိုက်ပါတယ်။
ကိုဝေဖြိုး အ၀တ်တွေကို ကျွန်တော့်ရှေ့တင်ချွတ်ချလိုက်ပြီး ပြည့်တင်းနေတဲ့ သူတင်သားဆိုင်တွေ အိကနဲအိကနဲဖြစ်အောင်လုပ်ရင်း ရှေ့က အိုဗာဆိုဒ်ငရှည်ကို တရမ်းရမ်းနဲ့ လက်ထဲက သောက်လက်စခွက်ကိုမော့ရင်း ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားတယ်။ ဘာအသံမှမကြားရဘဲ ဆယ်မိနစ်လောက် သူစိမ်နေပြီးနောက် ကျွန်တော့်စီစကားလှမ်းပြောတယ်ဗျ ` ခင်ဗျားရော အတူလာစိမ်ရင်ကောင်းမယ်ဗျ ပျင်းတာ´။
ခဏနေကပဲ ရေချိုးပြီးပေမယ့် ခပ်သင်းသင်းမွှေးနေတဲ့ ဆပ်ပြာရည်တွေရှိနေတဲ့ ရေစိမ်ကန်ထဲ ကျွန်တော်လည်း အ၀တ်မပါ ဗလာ ကိုယ်တည်းဝင်ရောက်လိုက်ပါတယ်။ ၀င်ပြီး ခဏငြိမ်နေစဉ်မှာပဲ သူ့ကိုငဲ့ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်မျက်နှာကိုကြည့်ရင်းသူ -ွင်းထု နေတာ သတိထားမိရရော။ ရေနွေးနွေးလေးကို စိမ်နေရတာရော အမွှေးရနံ့ကရော ရေစိုနေတဲ့ သူ့ပုံစံကိုကြည့်မြင်ရတာက စိတ်ထဲ တစ်မျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ `ကဲ..ကိုဝေ…ခင်ဗျားကိုပြောထားတယ်လေဗျာ ရဲလင်း ကီးသလို သူ့ထက်သာအောင် ကျွန်တော်လည်းကီး ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ ဟဲဟဲ´ ကျွန်တော်မထိန်းနိုင်ပြောလိုက်ရပါရဲ့။
`အင်း….ဟုတ်ပါတယ်…ရှီး…အ´ သူနှုတ်ဖျားက မလုံမလဲအသံလိုမျိုးနဲ့ပြန်ပြောတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ငပဲကိုနှစ်ကြမ်ထိ ကီးပေးခဲ့ဖူး တယ်…ပြီးတော့ သူလည်း ကျွန်တော့်ကိုကီးပေးခဲ့ဖူးတယ်လေ။ ဆိုတော့ အခုဟာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်မှ မဟုတ်တာဘဲ။
သူ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်မျက်နှာနား သူ့ပစ္စည်းတရမ်းရမ်းနဲ့တိုးလာတော့ ကျွန်တော် လက်နဲ့အသာဆွဲကိုင်ပြီး ပါးစပ်ထဲ ထည့်လိုက်ပါတယ်။ သူ့လက်အစုံကလည်း ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကိုထိန်းကိုင်လိုက်ရင်း ခပ်ရှည်ရှည် အသားချောင်းကြီးကို လည်မျိုထဲထိ ရောက်အောင်ဖိသွားဖို့ကြိုးစားရော အကြိမ်ရာချီမက ရဲလင်းတစ်ယောက် ကိုဝေဖြိုးကိုကီးပေနေစဉ်မှာ မြင်ဖူးခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပါပဲ။ ကောင်ငယ်လေးအရွယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရဲလင်းတစ်ယောက် ဒီဟာကြီးကို လည်မျိုထဲ ဆို့အင့်အင့်မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုများနှစ်ရှည်လများ ထိန်းသိမ်းကစားခဲ့ပါလိမ့်နော်။ ရဲလင်းအဖေ၊ပြီးတော့ သူ့ညီအစ်ကိုတွေအားလုံးဟာ အလွန်တရာရှည်လျားတဲ့ငပဲဆိုဒ်တွေကိုပိုင်ဆိုင် ခဲ့တဲ့အကြောင်း သူပြောပြတာကို အမှတ်ရမိတယ်။ ကျွန်တော်လည်မျိုထဲ အနည်းငယ်တစ်ဆို့သလိုဖြစ်သွားပြီး သီးမလိုဖြစ်တော့ ကိုဝေဖြိုးက `အိုး….ဆောရီး´တဲ့။
ကျွန်တော်ခေါင်းကို နည်းနည်းငြိမ့်ပြီးအချက်ပြလိုက်တော့ သူ့ပစ္စည်းကို အနည်းငယ်ပြန်ဆွဲထုတ်တယ်။ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို ကိုင်ထားတဲ့ သူ့လက်အစုံကို ရုပ်သိမ်းမသွားဘူး ရှိနေဆဲ ဒါပေမဲ့ သိပ်ပြီး အတင်းအကြပ်သဘောမဆန်တော့ဘူးပေါ့။ ကျွန်တော် သူ့ငပဲ ကို ထိပ်ဖျားပိုင်းလေးကအစ တစ်စတစ်စလျှာနဲ့ရစ်ပတ်လိုက် ဆွဲစုပ်လိုက် ပါးစပ်ထဲအထုတ်အသွင်းလုပ်ကြည့်လိုက်နဲ့ကစားက လည်မျို ထဲထိမရောက်တောင် သွင်းနိုင်သမျှသွင်းဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါရဲ့။ `Damn…ဒီဖီးလ်က သောက်ရမ်းမိုက်တယ်….အခန်းထဲသွားပြီး ကလိုင်းရ အောင်….အဲ…တစ်ဖက်သက်တော့ မဆန်ပါဘူးနော်´ သူကပြောပြီးစလစ်နံပါတ်တစ်လုပ်ချင်သေးတာ။
အစကတော့ ချီတုံချတုံဖြစ်သေးတာပါ…ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကလည်း အသားကုန်ဆန္ဒပြနေပြီး သူ့ငပဲထိပ်က အရည်ကြည်လေးရဲ့ ငံကျိကျိအရသာကလည်း ဆွဲဆောင်နေပြန်တော့ ကျွန်တော်ကပဲ ရှေ့ကနေ အိပ်ခန်းရှိရာကိုသွားလိုက်ပါတော့တယ်။
ခါးမှာရှိနေဆဲ jockstrap လေးကို ချွတ်ထည့်လိုက်ပြီး အိပ်ယာပေါ် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် တွားတက်လိုက်ကာ နှစ်ဦးသား သက်သောင့်သက်သာရှိပြီး အဆင်ပြေတဲ့ sixty-nine အနေအထားလှဲလိုက်ကြတယ်။ ကြီးမားပြီး အညိုရောင်သမ်းနေတဲ့ သူ့ငပဲကို အဖြူရောင်နို့ရည်တွေထွက်လာမယ့်အသွင်နဲ့ ကျွန်တော်က တပြွတ်ပြွတ်စစုပ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ် သန့်ရှင်းပြီး အနံ့လေးသင်း နေတာက ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်နေတော့တာကိုး။ ရုတ်တရက် သူအိပ်ရာပေါ်ကလှိမ့်ဆင်းလိုက်က ကျွန်တော့်ခြေရင်းမှာနေရာယူလိုက်ရင်း ကျွန်တော့် ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို သူ့ပခုံးပေါ်တင်လိုက်တာ မြန်မှမြန်…အာ…ငြင်းဆန်ချိန်တောင်မရ တွန့်ရုံရှိသေးတယ် သူက ခုတင်ဘေး ခုံပုအံဆွဲထဲက အဖော်ကိုဖောက်ပြီး စွပ်ပြီးနေပြီ သူ့ငပဲကိုကွန်ဒုံး။
တကယ့်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ပဲ….တကယ်တမ်းဆို အိမ်ထောင်သည်တွေကို ကျွန်တော်ရှောင်ကြဉ်လေ့ရှိပေမယ့် ကျွမ်းကျင်တာ တစ်ဖက်သားကို အလိုက်အထိုက်ဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တာတွေကြောင့် ကျွန်တော်မငြင်းဆန်မိတော့တာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ တစ် ရစ်ရစ်နဲ့ သူ့ငပဲကြီးကို ဖိသွင်းလိုက်တာမှာ ရင်ဝထဲဆို့လာသလိုခံစားရရော။ နည်းနည်းနာကျင်သွားတာကြောင့် ခပ်တိုးတိုးညည်းမိ တော့ သူ့ငပဲကိုတစ်ချက်အဆုံးထိဖိသွင်းထားရင်း ငြိမ်သက်လိုက်ကာ တောင်းပန်စကားဆိုသဗျ။ `ဆောရီး….အဆင်ပြေ..ပြေရဲ့လား´
ခါးအောက်ကို ခေါင်းအုံးတွေခုလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ခါးနည်းနည်းမြင့်သွားတော့ ခြေထောက်တွေကို ခပ်ကားကားအနေအထားဖြစ်အောင် နေစေရင်း သူ့ငပဲကို ဖြည်းဖြည်းပြန်သွားတာ သူ့ရွှေဥတွေက ကျွန်တော့်တင်သားတွေနဲ့ဖိကပ်သွားတာကိုခံစားရပါတယ်။ တစ်ချက် တစ်ချက် ဆွဲထုတ်လိုက် ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်သွင်းလိုက် လှုပ်ရှားမှုများဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးနာရီက လွင်ကိုရဲ့ တက်ကြွမှုတွေကို ပြန် သတိရစေရော။ ကျွန်တော် ကျွန်တော် Bottom နေရတဲ့ဖီလင်ကို…အဲ..ကိုဝေဖြိုး-ိုးတာကိုသဘောကျနေပြီ။ `အိုး….အိုး….Shit… အရမ်းမိုက်တယ်….အာ….အဲ့တာပဲ….အဲ့တာပဲ….Oh god….ခင်ဗျားလုပ်တာကို အရမ်းသဘောကျလာပြီ…အာ´ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင် ညည်းညည်းညူညူပြောမိလေ သူက ဆောင့်ချက်ပိုပြင်းထန်လေပါပဲ။
သူ့နှုတ်ဖျားက မိန့်မူးစွာထွက်လာသော ညည်းညူသံတွေဟာ အရင်က ရဲလင်းကိုသူလုပ်နေတုန်း ကြားကြားနေရတဲ့အသံတွေနဲ့ထပ်တူ ဆိုတော့…အာ….ကျွန်တော်နဲ့ ရဲလင်းက open relationship တစ်ခုလိုနေဖို့သဘောတူထားပေမယ့် ကျွန်တော် သူ့ပါတနာကိုလုနေ သလိုများဖြစ်နေမလား။ ခပ်သေးသေး ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲ ကိုဝေဖြိုးရဲ့ ငထွားကြီး တနင့်တပိုးဝင်ထွက်နေတာကို ရဲလင်း မြင်များမြင်သွား ရင်ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲ သိတော့သိချင်မိတယ်။ ကျွန်တော့်ဖီးလ်တက်သံ အော်ဟစ်ညည်းညူသံတွေဟာ ရဲလင်းလောက်မကျယ်ပေမယ့် တစ်ဖက်သားကို ပိုမိုတက်ကြွစေဟန်တူပါတယ် ကိုဝေဖြိုးရဲ့အမူအယာတွေက ပိုပိုသဘောကျပုံပေါ်နေရော။
`ကျုပ်…ကျုပ် ကြာ..သိပ်ကြာကြာမထိမ်းနိုင်တော့ဘူးဗျ…..ခင်ဗျား ကျေနပ်အောင်တော့လုပ်ပေးပါ့မယ်….အာ´ တော်တော်ကြာအောင် ပန်းထုတ်မယ့် သူ့သုက်ရည်တွေမထွက်ခင် အဲ့လိုပြောတော့ ကျွန်တော့်ပေါ်မှောက်နေတဲ့ သူ့ကျောပြင်တလျှောက် လက်သည်းနဲ့ ကုတ် ခြစ်လိုက်သလို သူ့တင်ပါးတွေကို ဖြစ်ညှစ်ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ တင်သားဆိုင်တွေကို ဆွဲဆွဲဖိချတော့….``အာ……. ကျုပ်……….ပြီး….ပြီး…..အိုး……God! ….အာ´သူ့တင်သားတွေကို ကျစ်ခါကျစ်ခါနဲ့ ငပဲကို တဆုံးဖိဖိထည့်ရင်း သုက်ရည်တွေကို ပန်းထည့်ပါရော။
သိပ်မပျော့ခင်မှာပဲ သူ့ငပဲကို ကွန်ဒုံးချွတ်ကာ ရေတွေ ဆပ်ပြာတွေနဲ့သန့်ရှင်းကာမွှေးနေအောင် သူထလုပ်တယ်ဗျ။ သူ့ငပဲအရှည်ကြီး ကို ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲက တမေ့တမောဆွဲချွတ်တော့ ရဲလင်းအမူအယာအတိုင်းပဲ သူ့ရင်ခွဲထဲညွှတ်ကျသွားမိတယ်။ ရင်ခုန်တာလား နွေးထွေးတာလားမသိဘူး ရင်ခွယ်ကျယ်ကြီးထဲ ခိုဝင်ရတာကလေ။ ကျွန်တော် သူ့ငပဲ…ရွှေဥ….ပြီးတော့ ခရေ၀တွေကို မက်မက်မောမော လျက်ပြု နမ်းရှိုက်မိစဉ်ခဏ သူ ကျွန်တော့်ကို ဆွဲဖက်ကာ နှုတ်ခမ်းတွေကို အားရပါးရနမ်းစုပ်ပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးသား ခပ်မြန်မြန်ပဲ အိပ်မောကျသွားမိကြကာ အိပ်မက်ကမ္ဘာစီရောက်သွားကြရော။ ခဏနေတော့ မမာ့တမာ….အရာ တစ်ခု ကျွန်တော့် ခရေ၀ထဲ တိုးဝင်နေတာကို ခံစားရမိစေပြီးမှ သူက အိပ်နေတာကိုနှိုးတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်သွေးတွေ ဆူဝေ….ကျွန်တော့ ငပဲကို လည်းမိုးပေါ်ထောင်စေ….အာ…..ကျွန်တော့်ကို သူကီးထားတာ….ပြီးတော့မှ ခရေ၀ကို ကလိုင်းနေတာကိုး နောက်တစ်ကြိမ်ပေါ့။
ဒီတစ်ခါတော့ အလျင်မလိုတော့ဘူး…တကယ့်ကို ငြိမ့်နေအောင်ကို ဆိမ့်အောင် ခပ်ဖြည်းဖြည်းလေးကိုဆွဲနေတာ။ ခိုးစားတဲ့အနေအထား လို့ဆိုနိုင်တဲ့ ဘေးတစောင်းအနေအထားပေါ့နော်။ အမ်….ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်ရောက်နေလဲ သတိထားလိုက်တော့မှ ကြမ်းပြင်ပေါ်က ကော်ဇောပေါ်မှာ ဘေးစောင်းဖြစ်နေတာဗျ လူဆိုးကြီးပဲ။
အာ….အင်း….Fuck!....ကိုဝေဖြိုးက ကျွန်တော့်အနောက်ကနေ လုပ်နေတာဆို တော့ တံခါးဝကို မျက်နှာမူနေတဲ့ ကျွန်တော် မျက်လုံးပြူးသွားတာကို သူမသိဘူး ဆက်လုပ်နေတယ်။ ရဲလင်းတစ်ယောက် တံခါးရွက်ကို ကိုင်ပြီး အသာငြိမ်ကြည့်နေတာကိုး။ ကျောင်းပြေးဖို့ပြင်နေတဲ့ ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက် အတန်းပိုင်ကမိသွားတဲ့ပုံမျိုး သွားတွေ ပေါ်အောင် ရဲလင်းကို အပြုံးခပ်ကြီးကြီးပေးလိုက်မိပါတယ်။
ကိုဝေဖြိုးတစ်ယောက် ဘာမှသတိမပြုမိဘဲ ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲ သုက်ရည်တွေ နောက်တစ်ကြိမ်ဖြည့်ပေးဖို့ပဲကြိုးစားနေတယ်။ ခဏနေတော့ ကျွန်တော်ဘာမှမလှုပ်ရှား မညည်းညူဘဲ တံခါးဝကိုကြည့်နေတာ သတိပြုမိသွားပြီး သူမော့ကြည့်တော့ ရဲလင်းကို တွေ့သွားပါရဲ့။ သူ့ခန္ဓာကိုယ် တစ်ချက်တုန်သလိုဖြစ်သွားကာ လေသံခပ်ပျော့ပျော့ဖြင့်….´အိုး…ဘေဘီ…အကို မင်းကို မစောင့် နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်´ တောင်းပန်တိုးလျှိုးစကားဆိုလေတယ်။
ရဲလင်းက တဟဲဟဲ ရယ်မောလိုက်ကာ `အာ…အားမနာပါနဲ့ဗျာ….ညီရောက်တာ အခုလေးတင်ပါပဲ…အေးဆေးလုပ်….ညီ့ အချစ်ကြီးကို သာယာမှုဆက်ပေးလိုက်ပါဦး´
ဒါပေမဲ့ ကိုဝေဖြိုးက ဆက်မလုပ်တော့ဘဲ ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲက သူ့ငပဲကို အသာဆွဲထုတ်ပြီး မတ်တပ်ရပ်လိုက်တယ်။ ရဲလင်း တစ်ယောက် ကျွန်တော်ရှိရာကို လှမ်းလာရင်း ကျွန်တော့်တင်သားတွေကို အသာဆွဲကိုင်ဖြဲကာ ခရေ၀ကိုလျှာကျွေးပါရဲ့ သူ့ပါတနာရဲ့ အရည်တွေများရှိနေဦးမလား အရသာခံပုံပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲကို သူခိုဝင်လာကာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို သူမက်မက် မောမောနမ်းပါတယ်။ ကျွန်တော့် မိန်းမလေးကို ကျွန်တော်ပြန်လည်ဆွဲဖက်လိုက်ချိန်မတော့ ကိုဝေဖြိုး ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဦးခေါင်းနားကို ကွန်ဒုံးချွတ်ထားတဲ့ သူ့ငပဲကြီးကို ထိုးပေးတယ်လေ။ ဒီတော့ ရဲလင်းက သူ့ပါတနာရဲ့ ငပဲကို အသေအချာပြုစု ကျွန်တော် ကလည်း ရွှေဥတွေကိုကလိပေးတော့ အချိန်သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကိုဝေဖြိုးတစ်ယောက် ဇာတ်သိမ်းသွားပါရော။ `အစ်ကို လာနေတုန်း ညီ့ အချစ်ကြီးရှိနေလို့တော်သေးတာပေါ့။ လာမယ့်သောကြာနေ့ကြရင် Richard နဲ့ ဇေယျာဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဒီလာဖို့ခေါ်ထား တယ်ဗျ။ အစ်ကိုစိတ်ဝင်စားရင်လာခဲ့လေ….ကျွန်တော်တို့လင်မယားရယ်….သူတို့အတွဲရယ် ပါတီသဘောကဲကြမှာ´ ရဲလင်းက ကိုဝေဖြိုး ထရပ်ပြီး သန့်ရှင်းရေးသွားလုပ်နေတုန်း လှမ်းပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်။
နောက်တော့ သုံးယောက်သား အိပ်ရာပေါ်တွားတက်လိုက်ကြရင်း မကြာခင်မှာပဲ အချိန်ကြာကြာအိပ်ပျော်သွားကြပြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အိပ်ယာနိုး လာတော့ ကိုဝေဖြိုးမရှိတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲဝယ် ရဲလင်းခိုဝင်အိပ်စက်နေပြီး သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်ကိုလွတ် ထွက်သွား မှာစိုးရိမ်သိအလား ဖက်တွယ်ထားပါတယ်။
သူ့နှုတ်ဖျားကလည်း ဘာတွေရောင်ရမ်းပြီး ပြောနေတယ်မသိ ချစ်တယ်…..မခွဲဘူးနော်….ကျေးဇူးပါဗျာ….တွေလည်းပါသေးတယ်။
ကျွန်တော် နှစ်လိုအားရစွာပြုံးလိုက်မိပြီး သေးပေါက်ချင်လာတာကြောင့် အိပ်ရာကအသာထထွက်လာလိုက်ပါရဲ့။
သူ့ပါးလေးကို တော့ တစ်ချက်နမ်းခဲ့တာပေါ့လေ။
Alex Aung (25 July 2014)
စာကြွင်း ။ ။ အိမ်ထောင်သည်တွေနဲ့ ပါတ်သက်တာ လိင်ဆက်ဆံတာမျိုးကို ကျွန်တော်လုံးဝသဘောမကျပါဘူး ရှောင်ကြဉ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖျော်ဖြေရေးသဘော သက်သက်အဖြစ်ရေးလိုက်ခြင်းပါလို့နော်။
Posted by Alex Aung at 6:48 PM No comments:
Posted by Alex Aung at 12:55 PM No comments:
ကုမ္ပဏီရုံးခန်းက အရမ်းအကြီးကြီးတစ်ခုတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ဒါပေမဲ့ သိပ်တော့လည်း မသေးဘူးဗျ။ ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းတစ်တွေရဲ့ အသက်တွေက ၁၇ နှစ်ကနေ ၂၅နှစ်အတွင်းဝန်းကျင်တွေပဲဆိုတော့ ဘော်ဒါကဏ္ဍကိစ္စမှာ အေးဆေးပါပဲ အတူတူညအပြင်ထွက်တဲ့အခါ သိပ်ညှိစရာမလိုဘူးပေါ့ အထူးသဖြင့် သောကြာနေ့ သို့မဟုတ် စနေနေ့ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့ ဘောလုံးအသင်းကန်တဲ့ ပွဲ စနေနေ့မှာရှိတတ်ရင်တော့ အိပ်မှာ မိုးအလင်းသောက်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘော်ဒါတွေကို သဘောကျတာက အားလုံးသည် အပေါင်းအသင်းစိတ်ရှိကြပြီ ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ပျော်ရွှင်တတ်ကြတာပါပဲ။ အပြင်ထွက်ကဲကြတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘော်ဒါထဲကတစ်ယောက်က စော်တစ်ပွေလောက် ကောက်လာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် စနောက်လို့မဆုံးပါဘူး။ တစ်ခါတလေ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကိုယ်စီအလန်းလေးတွေ ခေါ်လာဖြစ်ကြပါတယ် အခန်းကိုပေါ့။ တစ်ခါတလေကြရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ထိုင်ကြည့်ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘဲ စားသောက်ပြီး ဧည့်ခန်းထဲမှာတင် တပြားကြီးအိပ်ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ် ညအချို့ကိုအဆုံးသတ်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျန်းမာရေးကို အထိအခိုက်မဖြစ်စေမယ့် ပျော်ရွှင်မှုမျိုးတွေကိုသာ လုပ်ကြတယ်ပဲဆိုပါစို့။ ကျွန်တော့်အတွက်လိင်ကိစ္စကိုပြောရရင်တော့ သိပ်ပြီး မသောင်းကြမ်းဖြစ်ပါဘူး ဆယ်ခါတစ်ခါရံလောက်သာ အပျော်ရှာဖြစ်ပေမယ့် စနေနေ့တစ်ရက်လိုမျိုး အပျော်သောက်ဖြစ်တဲ့ရက်ဆိုရင် တော့ ထုံးစံအတိုင်း စိတ်ကူးယဉ်ပြီး အိပ်ယာထဲဝယ်လက်သမားလုပ်ပြီး သာယာမှုရှာရတာပါပဲ။
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ဘယ်လိုတွေစိတ်ကူးယဉ်ပြီး သာယာတတ်လဲ သိချင်မှာပဲနော်…သိချင်တယ်ဟုတ်? တော်တော်တော့ထူးဆန်းပါတယ် ကျွန်တော့်ရဲ့အကြီးမားဆုံးသော စိတ်ကူးဆန်းကျယ်မှုကတော့ ကျွန်တော်တို့ဘော်ဒါတွေ တစ်အုပ်စုလုံး (အားလုံး သို့မဟုတ် သူတို့ ထဲက တစ်ယောက်တလေနဲ့) စုပြီး စော်တစ်ပွေ သို့မဟုတ် နှစ် ပွေလောက်နဲ့ဝိုင်းဝန်းပျော်ပါးချင်တာလေ။ အဲဒီအတွေးတွေးမိရုံနဲ့တင် ကျွန်တော့်ငပဲဟာ မာလွန်းလို့ ကျောက်ခဲအဘခေါ်ရမလားဖြစ်ဖြစ်လာတတ်တာ အဆုံးစွန် စိတ်လှုပ်ရှားရခြင်းတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘော်ဒါတွေ အ၀တ်မပါဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်သူတို့များနေတတ်ကြရင် သူတို့လိင်တံတွေကြီးသလား သေးသလား စိတ်ထဲ မှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းစိတ်ဝင်စားမိတာလည်းဖြစ်တတ်လာတယ်။ ကျွန်တော့်ထက် သေးလား ကြီးလားသိချင်ရုံသက်သက်လားမသိဘူး။ တစ်ခါက သူငယ်ချင်းလေးယောက် စော်တစ်ပွေခေါ်ချကြရာမှာ သူတို့သုံးယောက်ချသွားလို့ စော်ပစ္စည်းက ကျယ်ပြီးရွှဲနေပြီ ကျွန်တော့် မှာ လုပ်ရကိုင်ရတာ ကြပ်ကြပ်တည်းတည်းသိပ်မရှိလို့စိတ်ပျက်ကာ သူတို့သုက်ရည်လား ဘာလားမသိရဲ့အနံ့တွေနဲ့ပဲစိတ်ထဲညစ် နေမိတယ်။ သူတို့ စော်ပစ္စည်းထဲမှာပဲ ပန်းထည့်ထားကြသလား ကွန်ဒုံးကို ချွတ်ပြီးမှ အပြင်မှာထုတ်သလား စိတ်ကူးကြည့်မိတော့ ကျွန်တော့် ငပဲကမာသထက်မာလာကာ တစ်ခါတလေ သူတို့တွေထဲက တစ်ယောက် ယောက်က ထိုင်ကြည့်နေကြရင်းမှ ကျွန်တော့် တင်ပါးကို နောက်ကလာကိုင်ပေးရင်ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲကို နောက်သလိုလိုနဲ့ လက်ချောင်းတစ်ခုခုကိုရုတ်တရက်ထည့်လိုက်ရင် ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်မှာ စော်ပစ္စည်းထဲကငပဲမချွတ်ဘဲ ပြီးပြီးသွားတတ်ရော။ တစ်ခါတရံ အိပ်မက်စိုတွေမက်တဲ့အထိ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော့်ငပဲ အသားကုန်မာလာပြီး ပြီးချင်လာသလိုဖြစ်လာလို့ အိပ်ရင်းကနိုးနိုးလာတတ်တာလည်း ကျွန်တော့်စိတ်ကူးယဉ်မှုကြောင့် ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကျော်လွင်ဆိုတဲ့ ၀န်ထမ်းအသစ်တစ်ယောက် ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုရောက်လာတယ်။ ကျော်လွင်က အရပ် ၅ပေ၁၀လက်မ၀န်းကျင် သာမန်အသွင်အပြင်နဲ့ပေမယ့် တော်တော်ကြည့်ကောင်းတဲ့ဘဲတစ်ပွေပါ။ မပိန်မ၀နဲ့ ကြံ့ခိုင်တဲ့အသွင်ရှိပြီး သူ့ဆံပင်တွေက နက်မှောင် ကာ စတိုင်ကတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အိပ်ယာကထကာစ စတိုင်လ်လို့ပဲမြင်ပါရဲ့။ ဘာပဲသူဝတ်ဝတ် ကောင်းကောင်း မွန်မွန်သပ်သပ်ရပ်ရပ်တော့ဝတ်သလို ညပိုင်းအိုဗာတိုင်းဆင်းတဲ့အခါဝတ်လာတတ်တဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ဆို တော်တော်ကြည့်ကောင်းတဲ့ တစ်ယောက်ပါပဲလေ။ ကြိုးတစ်ခုကို မချည်တတ်လို့သူ့ကိုဘယ်လိုချည်ရမယ်ဆိုတာမေးမြန်းဖြစ်တော့ သူ့ရဲ့စိတ်ရှည်မှုနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု က ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ရုတ်ချည်းလို နှစ်သက်မိသလိုခံစားရပါတယ်။ သူ့အသက်အရွယ်က ကျွန်တော်နဲ့ ရွယ်တူလောက်ပဲရှိပြီး ကျွန်တော် ဘောလုံးပွဲသဘောကျသလို သူလည်းနှစ်သက်တတ်တယ်ဗျ။ သိပ်မကြာပါဘူး ညအပြင်ထွက်တာတို့ ဘာတို့ကို သူလိုက်မလား ဖိတ်ခေါ်ဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်တို့အုပ်စုထဲအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာပါရော။
လတွေဖြတ်ကျော်လာတော့ သူနဲ့အချိန်ဖြုန်းရတာကို ကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်စပြုလာပါတယ်။ ပြီးတော့ စော်တစ်ပွေကိုခေါ်ပြီး နှစ်ယောက်သားပျော်ပါးဖို့ကိစ္စ သူ့ကို ကျွန်တော်စပြီး ဖြားယောင်းဖြစ်ပါရဲ့ ရုံးမပိတ်ခင်ကြားရက်တစ်ရက်ရက်ရဲ့ညမှာလေ။ အဲလို ကြားရက်တွေရဲ့ ညတွေဟာ အပျော်အဖော်ရှာဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် စော်ရှာဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သိပ်တော့အဆင်မပြေလှပေမယ့် ကျော်ကျော်နဲ့ စကားပြောရတာ ဟိုသွားဒီသွားအတူစားသောက်ရတာလေးကိုက ပျော်စရာထင်မိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အပေါင်းအသင်းတွေလောက် သူထင်ပေါ်မှုမရှိပေမယ့် သူ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုခုကို ကျွန်တော်သဘောကျနေသလားလို့။
``ဇော်ကြီး´´ သူရုတ်တရက် စကားစတယ် ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းကို တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့လေ။ ``မင်းတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ချိတ်ချင်ရင် ငါ့ကိုကြည့်နေဖို့မလိုဘူးနော် ငါ့ကောင်! ငါက အေးဆေးဗျ´´ ကျွန်တော် တစ်ခါ သို့မဟုတ် နှစ်ခါလောက် အခွင့်အရေး ရရဲ့သားနဲ့ စော်တစ်ပွေပွေကို မချိတ်ဖြစ်တာကိုကြည့်ပြီးပြောတယ်ဖြစ်မယ်။
``ငါ မင်းကို ကလပ်မှာ တစ်ယောက်တည်းထားပြီး မသွားချင်ပါဘူးကွာ….ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်မရဘဲနဲ့´´ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျား က မဆိုင်းမတွပြောလိုက်မိတယ်။
တစ်ညတော့ သူ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ချိတ်မိချိန် ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ယောက်မှ မချိတ်မိသောအဖြစ်ကိုကြုံရတယ်ဗျ။ သူက အဲ့စော်နဲ့ အပြင်ထွက်သွားဖို့ ကျွန်တော့်ကို ခွင့်တောင်းတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်က သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တစ်ခွက် နှစ်ခွက်လောက်သောက်ပြီးနောက် ကျွန်တေ်ာတို့သုံးယောက်သား ကလပ်က ပြန်လာလိုက်ကြပါရဲ့။ ဟူး…..အခန်းပြန်ရောက်တော့ ကျွန်တော် အ၀တ်တွေ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ချွတ်ကာ masturbate လုပ်ဖြစ်လိုက်တယ် ကျော်လွင် တစ်ယောက် အဲ့စော်ကို ဘယ်လိုဖိ မယ်ဆိုတာကို စိတ်ကူးထဲမြင်ယောင်ကြည့်ရင်းပေါ့။ ဖောင်းကားပြည့်တင်းနေတဲ့ အဲ့စော်ပစ္စည်းကြီးထဲ ကျော်လွင့်ငပဲကြီး ၀င်လိုက် ထွက်လိုက်…အာ…..ရှီး…..ဒီကောင်ပြီးတော့ ကျွန်တော် အဲ့စော်ကိုထပ်မိမယ်……ပြီးတော့ ကျော်လွင်က ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲကို သူ့လက်ချောင်းကို ချော့သွင်းမယ် စော်ကိုချနေတုန်းပေါ့…အင်း……အိုးမိုင်ဂေါ့…..ဘယ်လိုဖီလင်လည်း….အာ…တရွရွနဲ့…..စော်ပစ္စည်း ထဲ တဆုံးထည့်ပြီး ပန်းထည့်အား….။ ကျွန်တော် တကယ်ပဲ သုက်ရည်တွေကို ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်မိပါတယ် ပက်လက်လှဲနေရင်းဆိုတော့ မျက်နှာပေါ်ကတောင် ကျော်သွားမလားပဲဗျာ။ ကျွန်တော် အချက်နှစ်ချက်ကိုတော့ သတိပြုမိလိုက်တယ်။ ပထမအချက်က ကျွန်တော် ဖျားနာနေတာမဟုတ်ဘူး မနာလိုစိတ်ဖြစ်နေခဲ့တာ ဒုတိယအချက် သူ အဲ့စော်အလန်းကိုရသွားလို့မနာလိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး အဲ့စော်က သူ့ကိုရသွားခြင်းအပေါ် မနာလိုစိတ်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။
ကျွန်တော် တစ်ညလုံးလိုလို ငိုနေမိခဲ့ပါတယ်…..ဘာကြောင့်လဲ မသိခဲ့ပါဘူး။
နောက်နေ့ရောက်တော့ မနေ့ညက ဘယ်လိုလဲလို့ သူ့ကို ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်။ သူက မိုက်တယ်တဲ့။ အဖြစ်အပျက်အလုံးစုံကို ကျွန်တော်မသိခဲ့ရပေမယ့် သူမနဲ့ဘယ်လိုပျော်ပါးခဲ့တယ်ဆိုတာကို ထပ်မံမသိချင်ပြန်ဘူး။
နေ့လည်စာစားချိန်ရောက်တော့ သူ ကျွန်တော်မျက်နှာမကောင်းဖြစ်နေတာကိုသတိပြုမိသွားတယ်။ ကျွန်တော်က ခေါင်းကိုက်လို့ပါလို့ပဲ သူ့ကိုအဖြေပေးလိုက်ပါရဲ့။ သူ ဂရုတစိုက်နဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲဝယ်ဖြစ်ပေါ်နေမိတာက သူ့ကိုထွေးဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းအစုံကိုအားရပါးရ နမ်းပစ်လိုက်ချင်စိတ်ပါ။ `သူ့ကိုနမ်းမယ်´ ဒါဆို ကျွန်တော် အခြောက်ဖြစ်သွားမှာလား??????
ကျွန်တော် ကျော်လွင်နဲ့ စကားဆက်စပ်ပြောတာလည်းမလုပ်ဖြစ် သိပ်လည်းမခေါ်ဖြစ်တော့ပဲ အရင်ကတည်းက တွေ့နေကျသော ဘော်ဒါတွေနဲ့ ရုံးပိတ်ရက်တွေကိုဖြတ်သန်းက သာမန်လည်ပတ်မှုအတိုင်း ပြန်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုနေလာတာ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ကြာပြန်တော့ သူ ကျွန်တော်တို့နဲ့ရှိမနေတာကို မနေတတ်သလိုဖြစ်လာပြန်ရော။ သူ အဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ စကားပြောဆို တွတ်ထိုးတာကို မနာလိုတာလား ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော့်ရဲ့တခြားသော သူငယ်ချင်းတွေနဲ့သူပိုအချိန်ဖြုန်းနေတဲ့အခါ စိတ်တိုလာတတ် တာတွေကရော ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေပါလိမ့်။ ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ဘာမှမဖြစ်သလို ပုံမှန်အတိုင်းနေထိုင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ် ကျော်လွင်က သူ့သဘာဝအတိုင်း သူ့ဘာသာနေနေတာပဲလေ။
သုံးလေးလလောက်ကြာတော့ ပြည်တွင်း ဘောလုံးကလပ်တွေရဲ့ ဖလားလုပွဲ နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမြို့တော်ကြီးမှာကျင်းပမှာဆိုတော့ ၈ယောက်ပါဝင်တဲ့အုပ်စုလေးဟာ ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကိုကြည့်ဖို့အတွက် ခရီးတိုလေးတစ်ခုအတူထွက်ဖို့ အစီအစဉ်ချကြပါတယ် ကြိုးစားကြပါတယ်ပေါ့။ ကျော်လွင်တစ်ယောက် ကျွန်တော်တို့လူစုရှိရာကို ညနေပိုင်းလာပြီဆိုတော့ အဲ့ဒီအစီအစဉ်အတည်ဖြစ်သွားပါ တယ်။ လတ်မှတ်တွေစီစဉ် လေယာဉ်နဲ့သွားကြမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ကြပါရဲ့။ တည်းခိုမယ့် မြို့လယ်က ဟိုတယ်ကိုလည်း twin rooms လေးခန်းကို bookings လုပ်လိုက်ပါတယ် ဒီလူစုမရောက်ခင်ကြိုတင်ပေါ့နော်။ ရုံးပိတ်ရက် စနေ တနင်္ဂနွေကလည်းမကြာခင်ရောက် လာတော့မယ်။
ကျော်လွင်နဲ့ တစ်ခန်းထဲ တည်းခိုရမယ့်အဖြစ်ကို ဘာမှန်းမသိဘူး ဆယ်ကျော်သက်လေးတစ်ယောက် ရင်ခုန်ပျော်မြူးနေသလို ကျွန်တော် ခံစားနေရပါတယ်။ ဘယ်တစ်ယောက်မှ ဟုတ်တယ် ဘယ်တစ်ယောက်ကိုမှ ဒီလိုခံစားချက်မျိုး မခံစားဖူး မခံစားရစဖူးပါ။ အဲ ဘယ်တစ်ယောက်မှလဲ ဒီလိုလူတစ်ယောက်နဲ့အတူတည်းခိုနေထိုင်ရတာလေးကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေလွန်းတာမျိုးရှိမှာ မဟုတ် ပါဘူး။ ညစဉ်လိုလိုတော့ ကျွန်တော် masturbate လုပ်တတ်ပြီး ကျော်လွင်ရဲ့ပုံရိပ်ကရောဘယ်လိုလဲ သူ့စိတ်ခံစားမှုတွေကရော ဘယ်လိုလဲဆိုတာတွေကို သိချင်စိတ်ဖြစ်မိတယ်။ သူ အ၀တ်တွေချွတ်လိုက်လို့ ပေါ်ထွက်လာမယ့် ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားကရော ဘယ်လိုများပါလိမ့်နော် ကျွန်တော့်လိုအနေအထားထပ်တူပဲလား။ နောက်ဆုံးတော့ သူနဲ့အတူ လေးညလောက်တော့ တစ်ခန်းထဲ တည်းရမယ်….သူ့ကိုယ်နံ့တွေရယ် သူ့အသက်ရှူသံတွေရယ် ကြားရမယ် ခံစားရမယ်ပေါ့လေ။
ပထမတစ်ရက် ကျွန်တော်တို့ ညနေပိုင်းခပ်စောစောလေးပဲ ရောက်သွားတယ် Checked in လုပ်ကြတယ်။ ညနေစာအတွက်တော့ အပြင်ထွက်စားဖြစ်ကြတယ် နည်းနည်းတော့သောက်ဖြစ်ကြပါတယ် အများကြီးတော့ မကဲဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော် ဟိုတယ်ကို 1:30 am လောက်ပြန်လိုက်တာ။ ကျော်လွင်က ရေချိုးခန်းထဲမှာ အ၀တ်လဲပြီး အခန်းထဲကို တီရှပ်တစ်ထည် ဘောင်းဘီတိုခပ်ပွပွတစ်ထည်နဲ့ ပြန်ဝင်လာတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ brief ဘောင်းဘီတိုလေး စွပ်ကျယ်လေးနဲ့ပဲ အိပ်ယာစောစောဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရဲ့။
ဘောလုံးပွဲစဉ် ဒုတိယနေ့ရောက်ခဲ့ပါပြီ။ နေ့လည်စာကို တော်တော်နောက်ကျမှစားဖြစ်ကြပါတယ် အစားအသောက်ကောင်းကောင်းနဲ့ နည်းနည်းပါးပါးမော့ကြတဲ့သူတွေလည်းမော့ကြတာပေါ့လေ။ ကျော်လွင့်ကြည့်ရတာ သိပ်သောက်ပုံမရပါဘူး ကျွန်တော်တို့ထဲမှာ သူက အေးဆေး တစ်ဘာသာ။ ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေက တော်တော်ကောင်းပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့အသင်းက မဟန်တော့ ကျွန်တော်တို့ရှုံးပွဲဆင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေက အားပေးတဲ့အသင်းကများ နိုင်ခဲ့ရင် အောင်ပွဲခံပြီး စားကြသောက်ကြမယ်ပေါ့ အခုတော့ ခေါင်းငိုက်စိုက်တွေနဲ့ ကျွန်တော့်အကြိုက် ရွှေပန်ဆိုင်းအသားကင်ဆိုင်တို့ နန်းယဉ်ယဉ် ရှမ်းစားသောက်ဆိုင်တို့ဘက် တောင်မလှည့်နိုင်ကြတော့ပါဘူး မြို့ထဲက နီးစပ်ရာ စားသောက်ဆိုင်မှာ ဗိုက်ဝရုံစားဖြစ်လိုက်ကြပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း သောက်သောက် စားစားသမားတွေကတော့ အနည်းအကျဉ်းသောက်ကြသေးတာပေါ့။ ၁၀နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်ကျတော့ ဆိုင်ထဲစားသောက်သူသိပ် မရှိတာတွေ့ရတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သွားဦးမလဲမေးမြန်းကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်မှမသွားချင်ကြဘူးဖြေကြတာနဲ့ တက္ကစီငှားပြီး ကျော်လွင်ရယ် ကျွန်တော်ရယ် ဟိုတယ်ကို ပြန်လာလိုက်ကြပါရဲ့။
ကျွန်တော့်မှာ ကျော်လွင့်ကိုတွဲပြီး အပေါ်ထပ်အခန်းရှိရာကိုခေါ်လာလိုက်ရတာ သောက်လာတဲ့ မူးရီရီတွေတောင် ဘယ်ရောက်ကုန် တယ်မသိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အခန်းထဲဝင်ဝင်ခြင်း ရေချိုးခန်းရှိရာကိုသူလှမ်းတယ်….အခန်းတံခါးကို မပိတ်ဖွင့်ထားတော့ သူ သေးပေါက်နေတာကို ကျွန်တော်မြင်ရရော။ သူ့ငပဲကို ကျွန်တော်သေချာတော့ မကြည့်ဖြစ်ပြန်ဘူး ဘောင်းဘီထဲဘယ်လိုပြန်ထည့်မလဲ တော့တွေးမိပေမယ့် ရှက်သလိုလိုခံစားရလို့ပါ။ သူ ရေချိုးခန်းထဲက ရိုင်တိုင်တိုင်ထွက်လာပြီးနောက် အိပ်ယာပေါ်ကိုပစ်လှဲလိုက်တယ်။ `ငါ့ကို ကူညီပါဦး ဇော်ကြီးရာ´ သူ့ရှပ်အကျီင်္ကြယ်သီးတွေကို တစ်ဝက်တစ်ပျက်ဖြုတ်ရင်း အိပ်ပျော်သွားသလိုငြိမ်သွားရော။
သူ့ကြယ်သီးတွေဖြုတ်ပေးတာတို့ သူ့ကိုယ်လုံးကြီးကို စောင်သေချာခြုံပေးတာတို့ကိုတော့ ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ အပေါ်ပိုင်း အ၀တ်တွေချွတ်ပေးပြီးတော့ ခုတင်ပေါ်သေချာအိပ်ဖို့ပြောတော့ သူ သတိရသလို မရသလိုနဲ့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပြီး ပြန်အိပ်သွားရော။ ကျွန်တော် သူ့ပခုံးတွေကိုအသာလှုပ်ပြီး ဘောင်းဘီတွေကိုရောချွတ်ဦးမလား မေးတော့ သူ ခေါင်းငြိမ့်ပြပြီး ဘောင်းဘီဇစ်ကိုကိုင်ကာ ပြန်လဲကျသွားပြန်သတဲ့။ ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံတွေကို ကျွန်တော်ပြန်ကြားရလောက်တယ်ဗျာ လက်တွေတောင် တဆတ်ဆတ်တုန်လို့ သူ့ဘောင်းဘီ ခါးပတ်ကိုဖြုတ်ပေးနေရချိန်မှာလေ။ ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖြုတ် သူ့ဘောင်းဘီခါးစကနေဆွဲကာ သူ့ခါးဆုံကနေ အောက်ကို ဆွဲချွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူကလည်း တင်ပါးတွေကို အလိုက်သင့်ကြွပေးကာ ခြေထောက်တွေကို ဆန့်ပေးရော။ သူ့ရှူးဖိနပ်ကိုလည်း ကြိုးဖြေချွတ် ခြေအိတ်တွေကိုလည်းချွတ်ကာ ဂျင်းဘောင်းဘီကို သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အဆုံးသတ်ဖယ်ရှားပေးလိုက်ပါတယ်။ ခပ်ကြပ်ကြပ် မီးခိုးရောင် အတွင်းခံဘောင်းဘီပါးလေးနဲ့ အိပ်ယာပေါ်ပြန်လှဲချလိုက်ပြီး ငြိမ်သွားပြန်ရဲ့။ သူ့ငပဲနဲ့အတူ ရွှေဥတွေကို ပထမဆုံးအကြိမ် သေချာမြင်ဖူးရတာပါပဲ။ ကျွန်တော်လိုချင်နေတဲ့အခွင့်အရေးတွေများ ပေါ်ပေါက်လာပြန်ပြီလား။
ကျွန်တော့်အသံကိုနည်းနည်းမြှင့်ပြီး သူကြားအောင်အသံထပ်ပြုလိုက်ပေမဲ့ ဘာမှမတုန့်ပြန်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အိတ်ထဲက ကင်မရာလေး ကို ကျွန်တော်အသာထယူလိုက်ကာ သူ့ပုံရိပ်တွေကို ထောင့်မျိုးစုံကနေ ရိုက်ယူပစ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုပုံစံ ဒီလိုပုံဟန်နဲ့သူ့ကို ကျွန်တော် နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ရဖို့ဆိုတာ မသေချာဘူးမဟုတ်လား။ အေးစက်စက်ညမှာ တစ်ယောက်တည်း လက်သမားလုပ်ရတာထက်စာရင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပုံရိပ်တွေကြည့်ရတာက ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်လေ။ ကျွန်တော် ရှေ့ဆက်တိုးလိုက်တယ် သူ့ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်လိုက်တာပေါ့ ခပ်အိအိတင်သားဆိုင်တွေကိုအရင် ကိုင်တွယ်မိရရင်း….အာ….မိုက်တယ်။
သူ့ရဲ့ပျော့နေတဲ့ငပဲကြီးဟာ လုံးဝန်းလှပသောရွှေဥတွေပေါ်ဝယ် အသာလှဲလျောင်းနေတာများကြည့်ကောင်းသေးတော့။ သူ့ငပဲကို ကြည့်ရတာ ပျော့နေချိန်ဝယ် လေးလက်မလောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ် တုတ်တာတော့တုတ်တယ်ဗျ။ ထိပ်အရေပြားကဖြတ်မထား တော့ နီစွေးစွေးငပဲထိပ်လေးကိုဖုံးနေတယ်လေ။ ဆီးစပ်ကအမွှေးနုတွေကလည်း ရင်အုပ်အလယ်ထိများတက်ပေါက်သလားထင်ရတယ် ဆက်နေရော။ သူ့ရွှေဥတွေက ကြီးမားလုံးဝန်းပြီး ပေါင်ကြားထဲအိနေတာကို အမှောင်ရိပ်ထဲမြင်ရပါရဲ့။ ကင်မရာလေးနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် လျှပ်တစ်ပျက်ရိုက်ခဲ့ပြန်တယ်။
သူ့ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်တယ် အမဲရောင်တွေ ဘွားကနဲပေါ်လာရော။ ကျွန်တော့်ငပဲမှာလည်း ဂျင်းဘောင်းဘီခပ်ကြပ်ကြပ်ထဲ မှာ အကျဉ်းအကြပ်ဖြစ်နေလို့ ခုန်ထနေတာကြောင့် ၀တ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီကို အမြန်ချွတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေး ကိုတော့ ချန်ထားရတာပေါ့နော် တော်ကြာ မတော်တရော်တွေဖြစ်ကုန်မှာစိုးတာကိုး။ ဘယ်အချိန်လောက်ထိ ကြာကြာထိုင်ပြီး ကိုယ့်ငပဲ ကို ကိုယ်ကိုင်ပြီးကစားနေမိတယ်မသိ ကျော်လွင့်ကိုကြည့်မိမှ လုပ်လက်စအလုပ်ကိုသတိရပါတယ်။ သူကတော့ အသက်ရှူပုံမှန်လေး ဖြစ်ပြီး တော်တော့်ကိုနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေပါပြီ။ ခုတင်ပေါ်မှာ တခြမ်းဘေးကပ်ပြီး သူစောင်းအိပ်နေတာကြောင့် ကျွန်တော်လည်း သူ့နံဘေးကို အသာဝင်လှဲလျောင်းလိုက်ရင်း သူ့ရင်အုံအနိမ့်အမြင့်ဖြစ်နေတာကို ငေးနေမိပါသေးတယ်။ ပြီးတော့မှ နီတာရဲသူ့နို့သီး ခေါင်းလေးကို အသာနမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ မျက်တောင်ရှည်ရှည်တွေက ကော့ညွှတ်လို့ မှေးမှိတ်ထားတာက အသည်းယားစရာ…. သန္တာရောင်သူ့နှုတ်ခမ်းစုစုလေးကလည်း နမ်းချင်စရာဗျာ။ ကျွန်တော် သူ့မျက်နှာရှိရာကို တိုးကပ်လိုက်ရင်း ပါးလေးကိုတစ်ချက်နမ်း လိုက်ကာ သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံကို ငုံထွေးလိုက်ပါတယ်။ တကယ်နုနုညံ့ညံ့ ငြင်ငြင်သာသာလေးအနမ်းပေးလိုက်တော့ သူ့နှုတ်ဖျားက ညည်းသံလေး မသိမသာထွက်လာပါရဲ့။ ကျွန်တော် ကျောထဲစိမ့်ကနဲ လန့်သွားတာကြောင့် နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်ပြီး ငြိမ်လိုက်မိတော့ သူ နှုတ်ခမ်းကို လျှာနဲ့တစ်ချက်သရပ်ပြီးပြန်အိပ်သွားတယ်ဗျ။
ဒီတစ်ခါ ပေါင်ခွဆုံက ခပ်ဖောင်းဖောင်းလေးဆီ အသာအယာတို့ထိလိုက်ပါတယ်။ ခပ်နွေးနွေးလေးနဲ့ အိနေသောအသားချောင်းကြီးက ကျွန်တော့်လက်ချောင်းများကြားထဲ ခံစားရတာ ရှိန်းကနဲပဲ။ သူ့ရွှေဥတွေကိုလည်း လက်လေးနဲ့ပွတ်သပ် ငပဲကိုအသာအယာအထက် အောက်ပွတ်သပ် လက်ဖ၀ါးလေးတွေနဲ့တို့ထိမိပါရဲ့။ ရုတ်တရက် သူ့ငပဲရှိရာနဲ့ လက်မအနည်းငယ်ကွာတဲ့အထိ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကို ကပ်လိုက်မိပြီးမှ ရှေ့ဆက်မတိုးဘဲ ခဏတော့ငြိမ်လိုက်မိပြန်တယ်။ သူ့ငပဲဆီက အနံ့က သေးနံ့လည်းမဟုတ် ကိုယ်သင်းနံ့လည်း မဟုတ် ကျွန်တေ်ာ့စိတ်ထဲ မရိုးမရွဖြစ်အောင်စွမ်းတဲ့ အနံ့အသက်အချို့ကို ရရှိလိုက်မိလို့ပါ။ ကျွန်တော် အခုလုပ်မိနေတာတွေဟာ လုပ်သင့်မလုပ်သင့် ကျွန်တော်မသိတော့ပါဘူး ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က မျိုးတူ နောက်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မူပိုင်တွေ ကို ကိုင်တွယ်နေမိတဲ့ကိစ္စ။ အိုး…..ကျွန်တော် သူ့ငပဲရဲ့ထိပ်ခေါင်းလေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့တို့ထိကြည့်ပြီးနောက်မှာတော့ ထိပ်ပိုင်းလေး ကို အသာငုံစုပ်လိုက်ပါတယ် ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ငပဲတစ်ခုလုံးဝင်လာတဲ့အထိပေါ့။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်တစ်ခုလုံးပြည့်သွားမတတ်ဖြစ်မှပဲ ကျွန်တော် အသာအယာလေး အထုတ်အသွင်းစလုပ်လိုက်တယ်။ ခပ်တင်းတင်းလေး တဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာပြီးနောက် သူ့ငပဲဟာ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲဝယ် မာတောင့်လာပါရော။ အင်း….ကျွန်တော်လည်းအလားတူ တောင့်တင်းနေပါပြီလေ။
ခပ်မြန်မြန်ပဲ သူ့ငပဲက ကြီးထွားလာလိုက်တာ ကျွန်တော့်မှာ သူ့ငပဲအရင်းကိုအသာကိုင်ဆုပ်ပြီးထိန်းရင်း ပါးစပ်ထဲအထုတ်အသွင်းကို စည်းချက်မှန်အောင်ကြိုးစားရပါတော့တယ်။ ခဏနေကတော့ ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ အခုတော့သူ့ငပဲက မတရားကိုထွားလာလိုက်တာ ပုံမှန်အရှည်ထက်တော့ တော်တော်လွန်တယ်ဗျ။ လက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ထားတာကိုက အားရစရာ။ ကျွန်တော် မတ်တပ်ပြန်ရပ်လိုက်ကာ ကင်မရာကို လှမ်းယူလိုက်ရင်း ပုံရိပ်အချို့ကိုရယူလိုက်ပါတယ်။ သူ့ပေါင်နှစ်ဖက်အကို အသာအယာကားစေလိုက်ကာ ခရေ၀လေးရဲ့ အနေအထားပုံတွေပေါ်အောင်လုပ်ရင်းလည်း ဓာတ်ပုံတွေရိုက်လိုက်သေးတယ်။ သူ့ပေါင်တွေကိုသူ ခပ်ကျယ်ကျယ်ယောင်ရမ်းပြီး ကားပစ်လိုက်ရောဗျ။ ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံတွေဟာ အဆက်မပြတ်အခုန်မြန်လာလိုက်တာ ရန်များစေမယ့်အဖြစ်တွေ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးကြားဘာမှမဖြစ်လာပါစေနဲ့လို့ ကျွန်တော် ဆုတောင်းမိပါရဲ့။ ကျွန်တော်လည်း ၀တ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီတိုကို ချွတ်ပစ်လိုက် ပြန်တော့ ညီဘွားက ၆လက်မကျော်လောက်အောင် ခုန်ထွက်လာပြန်တယ်လေ။ အခုမှသတိထားမိတယ် အတွင်းခံထဲက မတရားခုန်း ထနေရတာကြောင့် ထိပ်ပိုင်းလေးတောင် နာနေရတယ်။ ကျွန်တော် ကျော်လွင့်ငပဲရှိရာကို ခေါင်းငုံ့ကိုင်းလိုက်ရင်း သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲပြန်သွင်းကာ လည်မျိုထဲထိရောက်အောက် ကြိုးစားလိုက်သည်ပေါ့နော်။ ပြီးမှ စည်းချက်မှန်မှန် အထုတ်အသွင်းကစားလိုက် ပြန်တော့ သူ့ငပဲကြီးဟာ ပိုပိုထွားလာသလိုပါပဲ။ ကားထားတဲ့ သူ့ပေါင်ကိုပြန်မစေ့ပဲ ကျွန်တော်လုပ်သမျှပုံစံအတိုင်းသူငြိမ်နေတာဆို တော့ ဟုတ်ကောဟုတ်သေးရဲ့လား။ ဘာမှမစဉ်းစားဘူး ကားထားတဲ့သူ့ပေါင်ထဲ ၀င်မှောက်ပြီး ကျွန်တေ်ာ့လျှာဖျားတွေ အာခံတွင်းပါ မကျန် သူ့ခရေ၀ကိုလည်း နှိုးဆွကစားမိတော့ အနံ့အသက်လေးက တမျိုးပါ။ တိမ်တွေပေါ်လွင့်ရော…။
ကျွန်တော် သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အသာပွေ့ရင်း အိပ်ယာပေါ်မှာ ကြည့်ကောင်းအောင်ရွှေ့လိုက်ပြီး ခေါင်းအုံးပေါ်ကို သူ့ဦးခေါင်းလေး နေသားတကျတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ငပဲလေးပိုမိုမာတောင့်အောင် -ုပ်-ှုတ်ပေးလိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ချက် တွေကို ထပ်ဆောင်းယူမိပြန်ရော။ တစ်ချက်တော့ သူဘေးကိုစောင်းအိပ်ဖို့လှိမ့်လိုက်တာ ကျွန်တေ်ာအသာထိမ်းပြီး နေရာချပေးလိုက် တော့မှ သူ့ခရေ၀ကို ရှင်းအောင်မြင်လို့ရတဲ့အနေအထားကို နေတော့တယ်။ပြီးတော့ သူဘေးတစောင်းလှဲချလိုက်ပြန်တော့ သူ့ငပဲက ရှမ်းကနဲမိုးပေါ်ကို ချိန်ရွယ်နေရော။ ကျွန်တော်လည်း သူ့နားကို အသာတိုးကပ်လိုက်ပြန်ရင်း ပါးစပ်ကိုဟကာ သူ့ငပဲကိုသွင်းထုတ် လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ရုတ်တရက် မမူးတမူးအခြေအနေအရ သူ့လိုက်ပါလှုပ်ရှားမှုတွေကို ခံစားလာရပါတယ်။ ဒါ ဒါဟာ စွန့်စားမှုတစ်ရပ် ဖြစ်နေမှန်း ကျွန်တော်သိပါရဲ့။ အခန်းတစ်ခန်းလုံးလည်း မှောင်ပိန်းလို့ ခုတင်ဘေးစားပွဲပေါ်က မီးတစ်ပွင့်ကလွဲလို့ပေါ့လေ။ စားပွဲပေါ်က ဟနေသော ကျော်လွင့်ကျောပိုးအိတ်လေးထဲက လိုးရှင်းဘူးလေးတစ်ခုတွေ့တာနဲ့ယူလိုက်ကာ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းလေးတွေကို ရွှဲစို စေလိုက်ပါတယ်။ ပြီးနောက် ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲကို ခပ်ဖြေးဖြေးလေးထိုးသွင်းကြည့်မိပါရဲ့။ နာကျင်ရပါတယ်….ဒါပေမဲ့ ဒါကို ကျွန်တော် လိုချင် ခံစားချင်နေခဲ့တာပဲလေ။
ပထမတော့ လက်ခလယ်လေးကို ဖိသွင်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ လက်ညှိုးလေးကိုထပ်ထည့်လိုက်ကာ မကြာခင် လက်သန်းကြွယ်လေး ကိုပါကြိုးစားထည့်မိပါရော။ အာ…..အိုး…. Shit!!....အသွင်းအထုတ်လေးပုံမှန်လုပ်နေရင်း ပူထူလာပြီး စိတ်ထဲအသာအယာဖြစ်လာ တော့မှ ကျော်လွင့်ငပဲကို ဆွဲကိုင်လိုက်ကာ ဖိထိုင်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ လိုးရှင်းတွေလူးနေတဲ့ သူ့ငပဲရဲ့တနင့်တပိုးဝင်လာတဲ့ ဖီလင်က ဘယ်လိုမှန်းကို မသိ အီလယ်လယ်ဖြစ်ပေမယ့် ရင်ခုန်ရပါတယ်။
ခုတင်ဘေးစားပွဲပုလေးထဲက ကွန်ဒုံးတစ်ခုကို ယူလိုက်ပြီး သီးမွှေးငှက်ပျောသီးလိုဖြောင့်စင်းလှပသော သူ့ငပဲကြီးပေါ်ကိုစွပ်ချလိုက်ပါ တယ်။ ခပ်ပါးပါးရာဘာသားလေးက သူ့အသားနဲ့ထပ်တူနည်းပါးကျသွားတော့ အလွှာခြားတယ်လို့တောင်မထင်ရပါဘူး။ အပေါ်ကနေ Lube ရွှဲရွှဲလေးစွတ်လိုက်ကာ သူ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူရင်း တက်ထိုင်ချလိုက်တယ်ပေါ့ ခပ်ထွားထွားငပဲခေါင်းလေးပေါ်တေ့ရင်း။ အာ…. ကွမ်းသီးတဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်တာက နာလိုက်တာ….တကယ်နာတယ်…..စိတ်တွေကိုအားလုံးလျော့ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကိုဖြဲကိုင်လိုက်ရင်း ဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်နဲ့ တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားကာ ထပ်သွင်းကြည့်ပါတယ်။ ကျော်လွင်…..အာ….ကျော်လွင်ရဲ့ -ိုးတာကိုခံနေရပြီပဲ။ ၃လက်မ လောက်ဝင်အပြီးမှာတော့ ကျွန်တော်ခဏတော့အသာငြိမ်ပြီး အသက်၀၀ရှူလိုက်သေးတာ….ပြီးမှ တဖြည်းဖြည်းထပ်သွင်းဖို့ကြိုးစားပါ တယ်။ ၇ မိနစ် ၈မိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ သူ့ငပဲကြီး ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲမှာ ဆုံးဆုံးမြုပ်သွားပါပြီ။ ဒီတော့မှ ဖင်ကိုအသာလှုပ်ပြီး အထုတ်အသွင်း လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်လွင့်နှုတ်ဖျားကနေ တီးတိုးညည်းညူသံလေးသဲ့သဲ့ထွက်လာတယ်….သူ မနိုးလောက်သေးပါဘူး နော်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုက သူ့အတွက် တစ်ခုခုများဖိထားသလိုဖြစ်စေသလားမသိ။ ဆောင့်တယ် ဆောင့်တယ် သွင်းတာ သွင်းတာ…..နာကျင်မှုတွေ ပျောက်ပျောက်သွားသလိုပဲ အာ…။ ခဏနေတော့ သူ့လည်ချောင်းထဲက မသဲမကွဲ အသံလေးတစ်သံကြားလိုက်ရပြီးနောက် ကျွန်တော့်ခရေ၀မှာ ပြည့်ကြပ်သွားသလို ရုတ်တရက်ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ သူ ပြီးသွာြး့ပီလား?
ကျွန်တော် တင်ပါးလေးကိုအသာကြွရင်း သူ့ငပဲကိုအသာလေးဖွဖွဆွဲထုတ်ရပါတယ်။ ငပဲထိပ်နားရောက်တော့ အသာလေးငြိမ်ပြီးမှ ဆွဲထုတ်လိုက်တယ် အကုန်ပေါ့..အိုး…..ကျော်လွင့်ရဲ့သုက်ရည်တွေဟာ ကွန်ဒုံးထိပ်ပိုင်းမှာပြည့်နေရော။ ကျွန်တော့်သွေးတွေဆူပွက် နှလုံးခုန်သံတွေမြည်ဟည်းလာကာ သူ့ငပဲက ကွန်ဒုံးကိုအသာဆွဲချွတ်လိုက်ကာ အထဲကသုက်ရည်တွေကို ကျွန်တော့်ပါးပြင်တွေပေါ် ရင်အုပ်တွေပေါ် လက်ဖ၀ါးပေါ် အဖိုးတန်ရွှေရည်တွေသွန်းဖြိုးသလို ဖြန်းချလိုက်တယ်။ တစ်စက်စက်လေးကတော့ ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်း ဖျားမှတစ်ဆင့် ပါးစပ်ထဲရောက်သည်ပေါ့နော်။ လက်ထဲက သူ့သုက်ရည်တွေနဲ့ရွှဲနေပေမဲ့ အဲဒါနဲ့ပဲ မာတောင့်နေဆဲ ကျွန်တော့်ငပဲကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ကာ ကျော်လွင့်ပေါ်မှာ ကားယားရပ်လိုက်ရင်း လက်ကစားလိုက်ပါတယ်။ သုံးလေးမိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ ပန်းသွေး ရောင်ရဲနေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲခေါင်းထိပ်ကနေ အဖြူရောင်သုက်ရည်တွေဟာ အိပ်ယာတွေပေါ် နံရံတွေပေါ် တစ်လျော့ပြီး တစ်လျော့….။ တတိယ အလျော့မှာတော့ ကျော်လွင့်မျက်နှာနှင့်အတူ နှုတ်ခမ်းသားတွေပေါ် ကျရောက်သွားရော။ သူ့မျက်နှာပေါ်က သုက်ရည်တွေကို ကျွန်တော် လက်လေးနဲ့အသာသပ်ယူလိုက်ရင်း အချို့ကို သူ့ပါးစပ်ထဲထည့် အချို့ကို ကျွန်တော်အရသာစမ်းသပ်လိုက်ပါတယ်။ သူ့သုက်ရည်အရသာကော ကျွန်တော့်သုက်ရည်အရသာကောပေါ့။
အ၀တ်စတစ်ခုကို ရေဆွတ်ပြီး သူ့ကိုယ်ပေါ်က ပေကျံတာတွေကို အမြန်သုတ်သင်ပေးပြီးနောက် အိပ်ယာပေါ်ကို အသာဝင်လှဲလိုက်ပါ တယ်။ အိပ်ယာထဲလှဲနေပြီး ၁၀မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အထိ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ စွဲနေရောပဲ။ ဟင်း….ကျွန်တော် ကျော်လွင်နဲ့ လိင်ကိစ္စ ကိုပတ်သက်လိုက်တာဟာ ဘ၀မှာ တစ်ခါမှာ မကြုံဘူးသေးတဲ့အတွေ့အကြုံအသစ်အဆန်းတစ်ခုပါပဲလေ။ အေးအေးသက်သာပြီးစီး ခဲ့တာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရမယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့တက်ခဲ့ရသော ခပ်မတ်မတ်တောင်တက်လမ်းတစ်ခုကို အေးဆေးဖြတ် သန်းခဲ့ပြီဆိုတော့ အဆင်းလမ်းမှာ အေးဆေးပေါ့နော်။
ဟိုတွေး ဒီတွေးနဲ့ အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ မနက်ရောက်တော့ ညခင်းပိုင်းကဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မရှိခဲ့သလိုပဲဗျ။ ဘာမှ မဖြစ်လာဘူး။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲက အံ့သြစိတ်လေးတော့ဖြစ်မိပါတယ် ကျော်လွင်တယောက် သူအိမ်ကိုဘယ်လိုလာခဲ့တယ်…အ၀တ် တွေကို ဘယ်လိုချွတ်ပစ်လိုက်တယ်….အိပ်ယာပေါ်ကို ဘယ်လိုရောက်ပြီးအိပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကို သူဘာမှမပြောတာလေ။ အားလုံး သူ့ဖာသာသူလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ထင်နေပုံရတယ်။
အမူးလွန်ခဲ့တဲ့ မနေ့ညက အဖြစ်အပျက်ထက် ဒီည ဘောလုံးပွဲဖိုင်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးညဆိုတော့ ညကိုအပြင်ထွက်သောက်ကြဖို့ ကျော်လွင်က ဆော်သြပြန်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မျှော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့ တခြားလူသဘောတူတူမတူတူ သူပြောတာကို သဘောတူဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။ လာမယ့် ညနေမှာလည်း ဘာမှ ထွေထွေထူးထူးသွားစရာမရှိတော့တာ။ ခပ်စောစောလေးပဲ ရေချိန်ကိုက် ကြပါရဲ့။ ကျော်လွင်က ခပ်လန်းလန်း စော်လေးတစ်ပွေနဲ့ချိတ်မိတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့နဲ့လမ်းခွဲပြီးပြန်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်။ အခန်းထဲ ဟိုလှည့်ဒီလှည့်အိပ်နဲ့ ည ၁၁နာရီထိုးတဲ့အထိ တစ်ယောက်တည်း။ ဟိုတယ်ကို တစ်ယောက်တည်း စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ပြန်လာပြီး ခုတင်ပေါ် တက်လာခဲ့ရတာ တော်တော်အထီးကျန်တယ်။ တခြားဘော်ဒါတွေကလည်း တခြားနေရာတွေကို ဆက်သွားချင်ကြသေးတာနဲ့လေ။ ည ၂ နာရီဝန်းကျင်လောက်ကျတော့ ရင်းနီးနေတဲ့လေသံခပ်တိုးတိုးလေးကြောင့် လန့်နိုးလာခဲ့ပါတယ်။ ``ရှူး….´´လို့ပြောတဲ့အသံကိုက ကျယ်နေတာ……ခပ်ယိုင်ယိုင် အသံလေးတွေက တိုးပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ရင်းနီးနေတဲ့ လှုပ်ရှားသံအချို့ကြောင့်နိုးလာခဲ့တာထင်ပါရဲ့။ ကျော်လွင် ဟိုကောင်မလေးကိုတွဲပြီး အခန်းထဲဝင်လာတာလေ။ အိပ်ခန်းမီးရောင် ၀ါကျင့်ကျင့်ထဲဝယ် သူတို့နှစ်ယောက်အ၀တ်တွေ ချွတ်နေကြတာ ကောင်မလေးက စိုးရိမ်နေပေမယ့် ကျော်လွင်က ကျွန်တော်အိပ်ပျော်နေပြီဆိုတဲ့အမူအယာ မစိုးရိမ်နဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ ကောင်မလေးကျု ဖျောင်းဖျနေတယ်ဗျ။ ၀ိုး….ခပ်ထွားထွားခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး အ၀တ်မရှိတော့သလို သူ့ပေါင်ကြားက ငပဲကြီးမတ်ထောင် နေတာကိုလည်း ကျွန်တော်မြင်နေရပါတယ်….သူလှုပ်ရှားသမျှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုမြင်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေရပါရော။ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ဖွင့်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေထဲ မြင်နေရတာက ကောင်မလေးကလည်း အ၀တ်လေးချွတ်လိုက်တာနဲ့ ကျော်လွင်က အသဲလှဲလျောင်းစေတဲ့ပြီး လုပ်တော့တာပါပဲ။ သိပ်မကြာပါဘူး ကောင်မလေးပစ္စည်းထဲကနေ သူ့ငပဲကိုဆွဲမထုတ်ဘဲ အထဲမှာတင်ပြီးလိုက်တာကို ကျွန်တော်သတိပြုမိတယ်။ ပြီးတော့ နှစ်ယောက်သား ငြိမ်သက်ပြီးအိပ်ပျော်သွားကြရော။
သူတို့ကို မိနစ်၂၀လောက် ကျွန်တော်လှဲနေရင်းဆက်ကြည့်နေလိုက်ကာ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်….ကျော်လွင့်ကို နောက်တစ်ကြိမ်လောက်လိုချင်သေးတယ်လေ။ အခုအခြေအနေက အန္တရာယ်နှစ်ဆလောက်ရှိတဲ့အနေအထားရှိပေမယ့် ရီဝေေ၀ရဲဆေး တင်ထားတာက ဆက်လုပ်ဖို့သဘောတူနေတယ်ဗျ။ အခန်းထဲက မသဲမကွဲအလင်းရောင်နှင့်အတူ သူတို့ခုတင်ရှိရာကို ကျွန်တော်လှမ်း သွားလိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးအ၀တ်မကပ်ပဲ ငြိမ်နေကြတာ တော်တော်ကြည့်ကောင်းသား။ ကောင်မလေးကတော်တော်လှတယ် အသက်က ၁၉နှစ်လောက်ပဲရှိဦးမယ်နဲ့တူပါတယ်။ နက်မှောင်သော ဆံကေသာအခွေအလိပ်လေးတွေက သူမမျက်နှာမှာ ကပိုကရိုနဲ့။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေက သေးပေမယ့် လှတယ်….ရင်သားတွေကတော့ ထွားတယ်....အင်း။ ကျော်လွင့်ခြေရင်းနား ကျွန်တော်ကပ်သွား လိုက်ပြီး ပျော့နေတဲ့ သူ့ငပဲကို အသာကိုင်လိုက်ပြီး ပါးစပ်ထဲကိုအသာသွင်းလိုက်ပါတယ်။ သူ့သုက်ရည်အနံ့ရယ် ကောင်မလေးပစ္စည်း ရဲ့အနံ့ရယ်ပေါင်းပြီး ရနေပါရဲ့။ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းလေးကို တံတွေးအနည်းငယ်စွတ်လိုက်ကာ သူ့ခရေ၀ထဲအသာဖိဖိပြီးကလိမိ တယ်။ သူ့ငပဲက အချိန်ဖြုန်းခဲ့တာကြာပြီမို့ထင့် ခေါင်းမထောင်နိုင်ဘဲ လေးလက်မလောက်နဲ့ပဲငြိမ်နေရော။
ကျွန်တော် ကျော်လွင့်နံဘေး မလှမ်းမကမ်းမှာ ပိုးလို့ပက်လက်ဖြစ်နေသော ကောင်မလေးဆီ ကူးသွားလိုက်ကာ ဟစိဖြစ်နေသော သူ့ပစ္စည်းထိပ်က အစေ့လေးကို မျှဉ်းစုပ်လိုက်တယ်။ ကျော်လွင့်သုက်ရည်အနံ့တို့ကလှိုင်နေရော။ ပြီးတော့ သူမလေးရဲ့အရည်တွေက လည်းရွှမ်းနေတာ။ ပေါင်တံလေးကိုအသာပွတ် သူ့ဟစိဟစိလေးရဲ့နှုတ်ခမ်းသားတွေကို လက်နဲ့အသာပွတ်ပေးလိုက်တော့ ခပ်တိုးတိုး ညည်းညူကာ ပေါင်ကိုပိုမိုဖြဲကားပေးတယ်။ လက်တွေကလည်း ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းက ဆံနွယ်တွေကိုအသာပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ပါရဲ့။ ကျွန်တော် သူမကိုယ်ပေါ်ကို တွားတက်လိုက်ရင်း သူမနှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို အားရပါးရနမ်းစုပ်ပစ်လိုက်တယ် စိုစွတ်နေတဲ့ ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းသားတွေကို သူမအရသာခံသလားပဲ။ သူမ ကျွန်တော့်ပွတ်သပ်နမ်းရှုံ့မှုတွေကို ကြိုက်တယ်ဗျ ခပ်တိုးတိုးလေးညည်းညူလို့။
ဟာဟ….ကျွန်တော်အသာလေးပြန်ထ သူမပေါင်ကိုနည်းနည်းလေးကားစေလိုက်ပြီး လျောကနဲတစ်ချက်ထဲနဲ့ အဆုံးထိသွင်းပစ်လိုက် တယ်။ ကျော်လွင်က ရှေ့ကလမ်းကြောင်းထားသွားတော့ ကျွန်တော့်အတွက် အဆင်ပြေပြေအလိုက်သင့် လုပ်ကိုင်ရတာအိုကေသည်ပေါ့။ သူတို့အကာအကွယ်ယူလုပ်ကြသလား မလုပ်ကြသလား မသဲကွဲဘူး ရွှဲနေတာဆိုတော့ ကျွန်တော်ကတော့ ကွန်ဒုံးစွပ်လိုက်သေးတာပါ။ အဆုံးထိသွင်းကာမွှေနေပြီးမှ အသာလေးပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ကာ ငပဲခေါင်းထိပ်လေးနဲ့ သူမရဲ့ဆီးစပ်လေးအနှံ့ပွတ်ပွတ်ဆွဲလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျောကော့လာချိန်မှာတော့ ထိပ်ပိုင်းလေးကို အပေါက်ဝထဲပြန်ပြီး ထုတ်သွင်းလုပ်လိုက်ပြန်သေးကာ သူမရဲ့ပဲကြီးစေ့လေးကို တဖတ်ဖတ် ရိုက်ခတ်လိုက်တယ်။
အိုး……မာတောင့်တောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ပဲကြီးစေ့လေးကို ကျွန်တေ်ာ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့အသာပွတ် ပွတ်ပြီး ကစားပေးသေးတာပါ ငပဲကြီး အပေါက်လေးထဲ အ၀င်အထွက်လုပ်နေတုန်းမှာပေါ့နော်။ မရိုးမရွတွေ အရမ်းဖြစ်ပျက်နေတာကို တွေ့ပြီးနောက်မှာတော့ ကျွန်တော့်ငပဲကြီးကို အကုန်ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ကာ အဆုံးထိ တစ်ချက်ချင်း ဒုတ်ဒုတ်ထိဆောင့်ဆောင့်သွင်း လိုက်တာ သူမ ဗိုက်သားတွေ တဆတ်ဆတ်ခါသလို လက်ချောင်းတွေကလည်း အိပ်ယာခင်းကိုဆုပ်ညှစ်တာ ကျိုးကြေသွားတော့မတတ် ပါပဲ။ ကျွန်တော်သည်လည်း သိပ်တော့မထိန်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး ရှုံ့ပွရှုံ့ပွ သူမပစ္စည်းနှုတ်ခမ်းသားများရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့် မကြာခင်မှာပဲ အဆုံး သတ်မိပါတယ် သူမပစ္စည်းအတွင်းပိုင်းတစ်နေရာမှာပါ။ ကျွန်တော် ပြီးလို့မကြာခင်မှာပဲ သူမ နိုးထလာကာ ကျွန်တော့်ကို ကျေးဇူးတင် ကြောင်းပြောပြီး ခပ်မြန်မြန်အ၀တ်ထ၀တ်ကာ ခဏနေတော့ ပြန်ချင်ပြီဆိုတာနဲ့ အခန်းပေါက်ဝထိလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါရဲ့။
ဟင်း….အခန်းတံခါးကိုပိတ်ပြီးနောက် အ၀တ်အစားမရှိသော ကျော်လွင့်နံဘေးကို အသာဝင်လှဲလျောင်းလိုက်ရင်း သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံကို နုနုညံ့ညံ့ငြင်ငြင်သာသာအနမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ စိုစွတ်နေသော ကျွန်တော့်လျှာဖျားလေးကို သူ့အာခံတွင်းထဲထည့်ပြီးမွှေတော့သူက အလိုက်သင့်ပြန်ပြီးလှုပ်ရှားတယ်။ ကျွန်တော် သူ့နံဘေးမှာ တစ်နာရီခွဲလောက် လှဲလျောင်းနေပြီးနောက်မှာတော့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဒီညအတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက် ကျွန်တော့်ခုတင်ရှိရာကိုပြန်လာလိုက်ကာ အိပ်ယာပေါ် လှဲလျောင်းပြီး အိပ်ပျော်ဖို့ကြိုးစားမိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့လည်း နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပေါ့။
သူ နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ မနေ့ညကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာအချို့ကို သတိရပုံပေါ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျေးဇူးတင်ရမှာက ဟိုကောင်မလေးကို ကျွန်တော်တက်လုပ်တဲ့ကိစ္စ ဘာမှပြန်မဖော် အပြစ်မတင်တာက တစ်မျိုးကောင်းသားပါ။
ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံး အိမ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ် အဆင်ပြေပြေပါပဲ။ လမ်းမှာလည်းဘာပြဿနာမှမဖြစ် ကျွန်တော်ကသာ နံဘေးက ကျော်လွင့်ကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ပေါ့နော်။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ကြပြီး သုံးလေးလကြာပြီးနောက် ကျော်လွင်က ကြေငြာတယ် သူ နယ်မြို့လေးတစ်မြို့မှာ အလုပ်ရလို့ပြောင်းရတော့မယ့်အကြောင်း။ သူပြောင်းရွှေ့ရသောကိစ္စအတွက် ကျွန်တော် ယူကျုံးမရ တော်တော်လေးဖြစ်မိပါတယ်။ အဆက်အသွယ်မပျက်ကြဖို့….သူအားတဲ့အခါ ကျွန်တော်အားတဲ့အခါ သူ့ဆီ ကိုယ့်ဆီ လည်ပတ်ကြဖို့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား ကတိတွေပေးဖြစ်ကြတယ်။
သူနဲ့ခွဲခွာရခြင်းကြောင့် ကျွန်တေ်ာ့ပတ်ဝန်းကျင်လေး ကျွန်တော့်စိတ်ခံစားချက်တွေဟာ လေးလလောက်တော့ ကိုက်ခဲနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်သော ကုသသူကြောင့် ပျောက်ကင်းခဲ့ရပါရဲ့။
ကုသပျောက်ကင်းစေသူလေးကတော့ ကျွန်တေ်ာတို့ ကုမ္ပဏီဌာနစိတ်တစ်ခုက လက်ထောက်ဝန်ထမ်းအသစ်လေးတစ်ယောက် ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သူလေးက ဘောလုံးပွဲတွေကိုလည်း သဘောကျတယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဘော်ဒါတစ်အုပ်နဲ့ အားပေးတဲ့ ဘောလုံးအသင်း ပွဲကျင်းပရာမြို့တွေဆီ လိုက်လံအားပေးဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်…..နောက် ကျွန်တော်နှင့်အတူ twin အခန်းတစ်ခန်းထဲ မှာ တစ်ညလုံးနေထိုင်ဖို့ သဘောတူတယ်ဗျ။
စဉ်းစားမိပါတယ်….ကျွန်တော် သူနဲ့အတူအချိန်ဖြုန်းရတာကို မကြာခင်သာယာပျော်ရွှင်ကြည်နူးလိမ့်မယ်လို့…အဟုတ်။
Alex Aung (10 July 2014 – 11:46 p.m.)
Posted by Alex Aung at 1:05 PM No comments: